ဈေးကွီးအဖိုးတနျ – My Blog
“မလေေး” “ရှငျ့” “မောငျတို့လကျထပျရအောငျ၊မောငျအလုပျရပွီ” “မောငျဖဖေနှေငျ့မမေကေိုပွောလေ” “အေးပါကှာယောကျခမကွီးတှကေသလောတူပွီးသားပါ” မလေေးမှာအသားဖွူပွီးအရပျငါးပလေေးလကျမလောကျရှိပွီးလှပသောကိုယျလုံးကိုယျပေါကျရှိပါတယျ။မကျြနာခြိုပွီးအသားအရဝေငျးပဖွူစငျတဲ့အသားအရရှေိတယျ။မွနျမာဝတျစုံလိုကိုယျလုံးပျေါလှငျစသေောအဝတျအစားဝတျကမွငျသူတိုငျးနှဈခါလောကျပွနျကွညျ့ရတဲ့သူမြိုးဖွဈပါတယျ။ အင်ျဂလိပျစာအဓိကနှငျ့ဘှဲ့ရတယျ။ကိုမငျးသူနှငျ့တက်ကသိုလျကတညျးကခဈြခဲ့ရပွီး၊ကိုယျမငျးသူအလုပျရရငျလကျထပျမယျရညျစူးခဲ့ကွတဲ့ခဈြသူတှဖွေဈကွတယျ။ကိုမငျးသူကအနအေေးတဲ့သူဖွဈတော့မိဘတှကေလညျးသဘောတူပွီးသားဖွဈတော့သိပျမကွာခငျမှာပဲရုံးတကျလကျမှတျထိုးကွပွီးအိမျမှာပဲ မင်ျဂလာဆောငျဖွဈကွတော့တယျ။
“မင်ျဂလာဆောငျတော့လညျးအရငျကစညျးရှိကွတော့တဈဦးနှငျ့တဈဦးမလှနျကြူးခဲ့ကွပါဘူး” “မလေေး” “ရှငျ..မောငျ” “မင်ျဂလကျဖှဲ့တှလေညျးဖောကျကွညျ့ပွီးပွီမဟုတျလား” “အငျး.လမေောငျ” “မပငျပနျးဘူးလား” “အငျး.ပငျပနျးတာတော့ပငျပနျးပါတယျ” “အဲဒါဆိုအိပျကွရအောငျကှာ၊မောငျ့အခဈြကလေးကိုကွငျနာခငျြပွီ” “ရှူးတိုးတိုး.မမေတေို့ကွားပါ့မယျ” “သူတို့နားလညျပါတယျမလေေးရယျ” “အျောသိတာသိစမေမွငျစနှေငျ့တဲ့မောငျ” “လုပျပါကှာအိပျရအောငျ” “မောငျကလညျး..သိပျကဲတာပဲ၊ဒီပစ်စညျးတှသေိမျးလိုကျပါဦးမယျ” အမှနျတော့မလေေးတဈယောကျရငျတှခေုနျနပွေီး၊ရှကျနလေို့ဒီအလုပျတှလေုပျနတောပါ၊အခုတော့အဲဒါတှသေိမျးရငျးအခြိနျကဆယျနာရီကြျောနပွေီ။မလေေးကပစ်စညျးတှသေိမျးပွီးဍှကျနှာသဈခွဆေေး၊သနျ့ရှငျးရေးလုပျပွီးမှအိပျခနျးထဲဝငျလာလိုကျတယျ။ပွီးတော့ညဝတျအင်ျကြီလေးဝတျမလို့လုပျတော့.မောငျကကွညျ့နလေို့နညျးနညျးရှကျသှားတယျ။
“မောငျ..ဘာလို့ကွညျ့နတောလဲ၊ဟိုဘကျလှညျ့ကှာ၊မလေေးရှကျတယျ” “မငျးသူလညျး “အေးပါကှာ”ဆိုပွီးတဖကျလှညျ့ဟနျပွုပွီးမလေေးမပွီးခငျလှညျ့ကွညျ့တယျ” “ဟငျးမောငျနှျော”ဆိုပွီးအဝတျဟောငျးတှကေိုကုတငျခွရေငျးကအဝတျစငျပျေါခေါကျတငျလိုကျတယျ။ပွီးတော့မှခဈြသူလငျကိုကနျတော့ပွီးကုတငျပျေါလှမျးတကျလိုကျတယျ။မငျးသူလညျးကုတငျပျေါတကျလာသောမလေေးအားကွငျနာစှာပှဖေ့ကျပွီးပါးနှဈဖကျကိုမှေးကွူရငျး “သိပျလိမ်မာတဲ့မိနျးမလေးရယျ”။လို့ပွောလိုကျပွီးကုတငျပျေါလှဲခလြိုကျတော့တယျ “အမယျနဂိုကတညျးကလိမ်မာပွီးသားပါနှျော” “အေးပါကှာ” ကိုမငျးသူကမလေေးနှုတျခမျးအားစုပျယူနမျးရှိုကျတဲ့အခါမလေေးလညျးပွနျလညျနမျးလိုကျတယျ။မလေေးရောမငျးသူပါရငျခုနျမှု့တှနှေငျ့တဈဦးကိုတဈဦးကွငျနာစှာပှဖေ့ကျနမျးရှိုကျနကွေရငျးမငျးသူကကြော့ရှငျးပွီးသှေးစိမျးကွောမွမွလေးပျေါနတေဲ့မလေေးရဲ့လညျတိုငျကလေးကိုငုံခဲပွီးစုပျယူလိုကျတယျ။ “အို..မောငျရယျ” မလေေးမှာအလိုးခံရမညျကိုကွိုသိပွီးပိုပွီးရငျခုနျမှု့တှနှေငျ့အတူ၊မိနျးမောစပွုလာပါတော့တယျ။
“မငျးသူလညျးမလေေးအင်ျကြီကိုအပျေါတှနျးတငျကာ၊ဘရာအားခြှတျရငျမလေေးနောကျကြောသို့လကျလှမျးလိုကျပွီးအင်ျကြီခြိတျအားဖွုတျရာမလေေးပဲအိပျရာမှထပွီးဖွုတျလိုကျရတယျ။မလေေးဘရာခြိတျဖွုတျတုနျးမှာပဲမလေေးအကြီကိုခေါငျးကနခြှေတျဖို့ကွိုးစားလိုကျတယျ။ဘရာခြိတျဖွုတျလိုကျတဲ့မလေေးအကြီင်္ပါတဈခါတညျးခြှတျလိုကျတော့၊ဖွူးဖှေးဝငျးပတဲ့လုံးကဈြကဈြရငျနှဈမှာဟာအပွငျသို့ထှကျလာတော့မငျးသူလညျးထိုထိုသောနို့နှဈလုံးအားသသေခြောခြာကွညျ့ပွီးစို့လိုကျတယျ” “ပွှတျ..ပွှတျ..ပွှတျ” “အာ့မောငျရယျ..ကြှတျ..ကြှတျ” “မလေေးတဈယောကျစုပျသတျပွီးညညျးညူမိတယျ။အပြိုစငျနို့ပီသစှာပဲစုခြှနျနတေဲ့နို့သီးတှကေစူထှကျလာရငျးတသိမျ့သိမျ့တလှိုကျလှိုကျတကျလာသောကာမစိတျကွောငျ့ညညျးညူမိရလသေညျ။ “ပွှတျ..ပွှတျ…ပွှတျ” “အငျ့..ဟငျးးဟငျးးးးး” မငျးသူလညျးမလေေးခြိုခြိုကိုလြှာနှငျ့ယကျလိုကျစို့လိုကျနို့အုံလိုကျငုံလိုကျခဲလိုကျလုပျနသေဖွငျ့မလေေးမှာပိပိထဲအရညျတှစေိမျ့ထှကျလာမှနျးသိပွီးရှကျသှေးဖွာသှားလသေညျ။ မငျးသူလညျးမလေေးလုံခညျြကိုအသာဖွကောခြှတျသောကွောငျ့မလေေးလညျးခါးကိုကွှပေးလိုကျရပွီး။
မငျးသူကမလေေးအဖုတျကိုအတှငျးခံဘောငျးဘီထဲလကျသှငျးပွီးအမှေးနုလေးမြားကိုပှတျသတျပေးရာ။မလေေးမှာဓာတျလိုကျသကဲ့သို့တခကျြတှနျ့သှားပွီးပိပိထဲမှအရညျကွညျခြောဆီလေးစိမျ့ထှကျသှားသညျ။ပိပိအကှဲကွားလကျသှငျးပွီးမငျးသူမှာမေးလေးနို့ကိုစို့လိုကျသညျ။မလေေးလညျးဖီလငျတကျသထကျတကျလာပွီး”အျောညညျးသံလေးပေးမိလသေညျ။ မငျးသူကမလေေးအတှငျးခံကိုခြှတျလိုကျသဖွငျ့မေးလေးဒုတိယအကွိမျ..ဖငျကိုကွှပေးရပွနျသညျ။ပိပိမှာလညျးဖွူဖှေးဝငျးဝါနပွေီးနှုတျခမျးသားမြားမှာပနျးနုရောငျပွေးနလေသေညျ။မငျးသူမာခဈြရ၏ပိပိလှလှလေးကိုမွငျပွီးယကျပေးခငျြသောစိတျတဖှားဖှားဖွဈပျေါလာခဲ့သညျ “မလေေးပိကိုနမျးခငျြတယျကှာ” “မလုပျပါနှငျ့မောငျ” “မလေေးပွနျမလုပျပေးခငျြဘူးမောငျ” “မလေေးကလညျးကှာလငျမယားတှဖွေဈပွီးမှကှာ” “မလုပျပါနှငျ့မောငျရယျ၊မောငျလညျးဘုနျးနိမျ့မယျ၊မလေညျးလညျးငရဲကွီးပါ့မယျ” “လုပျပါကှာ” “မလေေးမလုပျပါရစနှေငျ့မောငျရယျ” “မလေေးမလုပျခငျြလညျးမောငျအတငျးမတိုကျတှနျးခငျြပါဘူးလေ၊မောငျတော့လုပျပါရစေ”
“အာ.မောငျမလေေးကိုငရဲမပေးပါနှငျ့မောငျ” မငျးသူလညျးမလေညျးအားမပွောတော့ပဲမလေေးပိပိအားအတငျးယကျလိုကျသညျ” “မလုပျပါနှငျ့မောငျမလေေးတကယျစိတျဆိုးမှာနှျော” မငျးသူလညျးဆကျမလုပျရဲတော့ပဲ၊မလေေးပေါငျကွားထဲဝငျကာမလေေးပိပိအားလိုးခလြိုကိသညျ “ဗဈြ..ဗဈြ…ဗြိ.ဗွဈ..ဗွဈ” “အားဖွေးဖွေးလုပျပါမောငျ” “ဗဈြ…ဖဈြ..ဖောကျ” “အိုး..မောငျရယျနာလိုကျတာ” “ခဏလေးပါစလုပျရငျဒီလိုပဲနာတယျလေ၊အပြိုစဈအမှေးပါးကိုဖောကျတာလေ” “သှေးတှမြေားထှကျကုနျပလားမောငျ” မငျးသူလီးကိုအပွငျဆှဲထုတျပွီးကွညျ့လိုကျတယျ။ “သှေးစလေးလောကျပါကှာ” “အမြားကွီးထှကျလာသလား” “စိုးရိမျစရာမရှိပါဘူးမလေေးရာ” ဆိုပွပီးမငျးသူတဈယောကျဆကျတိုကျပဲလိုးလိုကျတယျ “ဘှတျ..ဖတျ..ဖတျ..ဘှတျ” “အငျ့ဟငျ့အငျ့” “မငျးသူးလညျးဆကျတိုကျဆိုသလိုလိုးလိုကျရာသိပျမကွာခငျမှာပဲနှဈဦးသားပွိုငျတူပွီးသှားကွလသေညျ။
“ ခဈြခငျစကွငျနာစဆိုတော့စိတျတူကိုးယျတူနှဈဦးသဘောတူ လိုကျကွရာ။မလေေးမစုပျပေးသညျမှအပကနျြသညျ့ပုံစံမြိုးစုံဖွငျ့လုပျဖွဈကွလသေညျ။အိမျထောငျသကျကွာလသေံယောဇဉျတှခေိုငျမွဲပွီးလေးလလောကျတှငျမလေေးတဈယောကျကိုဝနျရရှိလသေညျ။နားလညျမှု့အပွညျ့ပေးနိုငျသောမငျးသူအားမလေေးမှာအခဈြတှပေိုခဲ့သညျ။ကိုယျဝနျရလာပွီဖွဈသောကွောငျ့အနာဂတျအတှကျမြှျောတှေးပွီးပြျောခဲ့ကွသညျ။သားလေးဖွဈဖွဈဖွဈသမီးလေးဖွဈဖွဈလိုခငျြကွသညျမှာဓမ်မတာပငျဖွဈသညျ့အလြောကျအနာဂတျစီမံကိနျးမြားခမြှတျရငျးနှဈဦးသားပြျောခဲ့ကွလသေညျ။ ကလေးလေးမှေးသောအခါကတြော့သားယောကျကြားလေးဖွဈပွီး၊မလေေးမှာနို့ခြိုတိုကျကြှေးရနျအခှငျ့မသာပဲဖွဈရသညျ။မလေေးမှာနို့မထှကျပေ။သိုသေ့ျာလညျးမလေေးကလေးအတှကျကိုယျတိုငျနို့ဘူးဖြျောပွီးပွုစုခဲ့ရာယခုဆိုလြှငျကလေးလေးမှာမူကွိုပငျတကျရတော့မညျ့အနအေထားပငျဖွဈသညျ။မလေေးအသကျမှာနှဈဆယျ့လေးခနျ့ဖွဈလရော။တသားမှေးတသှေးလှဖွငျ့စိုစိုပွပွေပေငျလှလာသညျ။
နို့တိုကျကြှေးရခွငျးမရှိသဖွငျ့နို့မှာလညျးအပြိုကတညျးကလိုဖွဈနသေညျ။မငျးသူမှာလညျးရာထူးတိုးဖွငျ့နောငျခြိုသို့ပွောငျးသှားသဖွငျ့မလေေးမှာမိဘနှငျ့အတူသားလေးအားမူကွိုထားပွီးရနျကုနျတှငျသာကနျြရဈခဲ့လသေညျ။တနတေ့ော့ ခေါငျးလြျောရငျးလညျပငျးဆံစအားကုတျခွဈရာမှဘုသေးသေးနှဈလုံးအားတှရေ့သဖွငျ့ဆေးခနျးပွရာတှငျ၊ဆရာဝနျမှ “ညီမလေး.ဆရာကဒါလေးကိုဘိုငျအိုစီလုပျခငျြတယျ” “ရှငျစိုးရိမျရလို့လားဆရာမ” “အငျးညီမလေးအဆီကြိတျကလေးဆိုရငျတော့ပွသနာမရှိဘူးပေါ့” “ကဲညီမလေးဂြိုငျးအောကျခဏကွညျ့ရအောငျ” “ဟုတျကဲ့ဆရာမ” ဆရာဝနျလညျးစမျးပွီးနောကျ “ညီမလေး.ဒီမှာလညျးတှတေ့ယျ” “ရှငျ” “ညီလေးအမပေါငျခွံကိုစမျးကွညျ့မယျသိလား” “ဟုတျကဲ့ရှငျ့” “ပေါငျခွံလညျးစမျးပွီးနောကျ” “ညီမလေးသခြောတယျ၊ဘိုငျအိုဆီပဲလုပျလိုကျပါညီမ” “ဟုတျကဲ့ရှငျ့ ဒီလိုနှငျ့နောကျတရကျခှဲစိတျခနျးဝငျပွီးပေါငျခွံနရောအားခှဲစိပျကာအသားစယူပွီးဓာတျခှဲခနျးသို့ပို့ရာအဖွလှောမြားရလသေညျ။
အဖွလှောအားဆရာမဆီပွရာ “ညီမလေးစိတျမကောငျးပါဘူးညီမလေး” “ရှငျ” “အမဆရာဆီစာရေးလိုကျပါ့မယျသှားလိုကျနှျော” ဆရာပေးသောစာနှငျ့ဆရာမညှနျပွသောဆရာဝနျကွီးနှငျ့တှရေ့ာ။ကငျဆာရောဂါကုသောဆရာဝနျကွီးဒေါကျတာစိုးအောငျဖွဈနသေောကွောငျ့စိုးရိမျစိတျဝငျရလပွေီ။ ဆရာဝနျကွီးက “သမီးအဖွလှောမှာကငျဆာလို့ရေးထားတယျသမီး” “ရှငျ” “ဒါဆိုကမြသရေတော့မယျပေါ့ဆရာကွီးရယျ” “အဲလိုခညျြးပဲမဟုတျဘူးသမီးဒီကငျဆာကသငံရညျအကြိတျကငျဆာလို့ချေါတယျ။ဖွဈတာနညျးနညျးကွာပွီ၊မကုရငျတောငျလေးငါးနှဈလောကျနရေပါတယျ။ကုသရငျပြောကျလိမျ့မယျလိုထငျတယျ “ရှငျ” မလေေးတဈယောကျမွငျးမိုရျတောငျပွိုလဲသကဲ့သို့ဖွဈရပွီ။ကလေးမကျြနှာမွငျယောငျရငျး “သားလေးရယျ၊အမသေတောအရေးမကွီးပါဘူး၊ငါးသားတဈယောကျအမိမဲ့သားရနေညျးငါးဖွဈရတော့မယျသားသားရယျ”လို့တှေးရငျးအိမျအပွနျလမျးတလြောကျအားရအောငျငိုရငျး၊အိမျအခွအေနကေလညျးဒီရောဂါဆိုးကုရလောကျအောငျငှကေမရှိ၊ကုသရရငျရောပြောကျမယျလို့အာမမခံနိုငျ၊မလေေးမှာမိမိအတှကျမပူပဲသားလေးအတှကျသာပူပငျရလသေညျ။
အိမျရောကျကလညျးမိဘနှဈပါးစိတျဆငျးရဲရမညျဖွဈ၍မပွောပဲဘာလုပျရမလဲစဉျးစားကာ၊အပူရုပျကိုဟနျလုပျနရေတော့သညျ။ မလေေးတဈယောကျမှာစဉျးစားရခကျနပွေီ။ “အငျး..ငါ့ဘဝကလညျးဆိုးလိုကျတာ၊သားလေးအနာဂတျအတှကျရော၊ဖဖေနှေငျ့မမေတေို့အတှကျရော၊ဟူး..ငါဘယျလိုလုပျရပါ့မလဲ၊ငါသသှေားရငျငါ့သားလေးဒုက်ခရောကျရမယျ။အငျးမိခငျသောကဆိုတာဒါပဲဖွဈမယျ၊..ငါဘာလုပျသငျ့သလဲ၊ငါအသကျမရှငျတော့ရငျသားလေးနှငျ့ငါ့မိဘတှဒေုကခရောကျမကနျြရအောငျငါကွံစညျမှဖွဈတော့မယျ၊ဘာလုပျရမလဲ………။ကိုမငျးသူရကေမြကိုခှငျ့လှတျပါရှငျ၊ကမြမောငျ့ကိုမခဈြလို့မဟုတျပါဘူး၊မောငျ့အပျေါသစ်စာမရှိလို့မဟုတျပါဘူးရှငျ၊ကမြဘဝကရှငျနှငျ့ရိုးမွကေပြေါငျးရဖို့ကံကပါမလာဘူးလေ။.
.မလေေးဆုံးဖွတျခကျြတဈခုခလြိုကျတယျ ‘”မမေေ” ဘာလညျးမလေေး” “သမီးအလုပျတဈခုလုပျမလို့” “ဘာလုပျမလို့လညျးသမီး” “ပှဲစားအလုပျပါမမေေ” “သမီးရဟေိုတလောကမှဆေးခနျးမှာခှဲစိတျရသေးတယျမဟုတျလား” “ဟုတျတယျမမေေ.ကုနျကစြရိတျတှမြေားလို့၊သားလေးကအခုဆိုမူကွိုတောသျတကျနပွေီလေ၊အဲဒါကွောငျ့ပါမမေေ” “ သမီးသဘောပါကှယျ” မလေေးကြောငျးတုနျးကသူငယျခငျြးတဈယောကျကိုသတိရလိုကျတယျ။သူကဟိုတယျမှာမနျနဂြောဖွဈနပွေီ၊သူ့ဆီပဲအကူအီာတောငျးရမယျ၊ဆိုပွီးဖုနျးဆကျတော့အဆကျအသှယျရတာနှငျ့သှားလိုကျတယျ “လာဟမေ့လေေး၊နငျလညျးအခုမှပျေါလာတယျ” “အေးလေ.ငါလညျးကလေးမှေးနတောနှငျ့ဟ” “နငျကကလေးမှေးတယျသာပွောတယျအရငျကထကျကိုလှလာပါလား” “ဟငျးးးးဟငျးးးး” “ဒါနှငျ့ဘာကိစ်စရှိလဲ” “ငါပွောတာခဏနးထောငျ၊ဘယျသူ့ကိုမှပွနျမပွောရဘူး” “အေးပါပွောပါ” “ငါဒုက်ခရောကျနတေယျ၊အခုငါသိပျမနရေတော့ဘူး၊ငါမသခေငျငါ့မိသားစုအတှကျငှရှောခဲ့မှရတော့မယျ၊အဲဒါကွောငျ့နငျ့ဆီလာခဲ့တာ
“ဟငျ..သူငယျခငျြးနငျ့အဖွဈကဆိုးလိုကျတာဟာ” “အေးလေ.နငျကူညီမှရမယျ” “အငျးးးကူညီတာကရတယျ၊ဒီမှာကနိုငျငံခွားသားပဲရှိတယျ” “အငျး”တဈခါတလလေညျးမွနျမာတှလောပါတယျ” “မွနျမာတှဆေိုတော့ငါစိတျပူတယျဟ” “အငျးစိတျတော့ပူစရာသိပျမရှိဘူး၊ဒီမှာတညျးတာဆိုတော့လူကွီးပိုငျးပါပဲ၊ဗရုတျသုက်ခတော့သိပျမလာဘူး” “ငါဈေးကောငျးကောငျးလိုခငျြတာ၊အဲဒါမှအဆငျပွမေယျ” “ဝနျဆောငျမှု့ကောငျးရငျရပါတယျဟာ” “ငါလညျးမလုပျဖူးဘူး” “နငျလညျးယောကျြားရပွီးသားပဲ” “အငျးပါဟာ” “အျောငါနငျပွောမှသတိရတယျ၊ငါမှာဘောစိတဈယောကျမှာထားတာရှိတယျ၊သူကအမှနျတှပေဲလကျခံတာ၊ငါပွောလိုကျမယျ၊မနကျဖွနျကိုးနာရီလောကျလာခဲ့ပေါ့၊ငါပိုကျဆံမြားမြားတောငျးလိုကျပါ့မယျ၊” “အေးလေ.နငျလညျးရာခိုငျနှုနျးနှငျ့ယူပေါ့” “မယူရကျပါဘူးသူငယျခငျြးရယျ” “နငျဖုနျးနံပါတျပေးခဲ့၊အလုပျဖွဈရငျပှဲဖွဈတယျလို့ပွောမယျ” “အေးပါကြေးဇူးပါဟာ” “အေးနအေုံးဟိုတဈကောငျရှိသေးတယျ၊ရနျနိုငျမငျးလေ၊သူကတိုးဂိုကျလုပျနတော၊သူ့ဆီကအမြားအားဖွငျ့အျောဒါတကျတယျ၊သူနှငျ့လညျးငါဆကျသှယျပါ့မယျ” “အေးကြေးဇူးသူငယျခငျြး” မလေေးအိမျသို့အပွနျမှာလမျးမှာရှအေတုနညျးနညျးဝယျပွီးပွနျလာခဲ့လိုကျတယျ။
နောကျရကျသားလေးကိုကြောငျးကားပျေါတငျပွီး၊မွနျမာဝတျစုံဝတျပွီးရှဆေငျကာတကျစီငှားပွီးဟိုတယျရောကျခဲ့တော့။သူငယျခငျြးကအခနျးထဲလိုကျပို့တယျ။အသကျလေးဆယျခနျ့ရှိလူကွီးတဈယောကျကာတံခါးလာဖှငျ့ပေးတယျလေ။သူငယျခငျြးကတံခါးပိတျပွီးပွနျသှားတော့ “ဟ..ဒီတဈခါတဈမြိုးပဲ၊မွနျမာဝတျစုံနှငျ့ထူးထူးဆနျးဆနျး” မလေေးအခနျးထဲသာဝငျလာရတယျခွဖြေားလကျဖြားတှအေေးစကျပွီးဒူးတုနျခငျြသလိုဖွဈနတေယျလေ၊ဒီအလုပျကပထမဆုံးလကျခံထားတာဆိုတော့စိတျမှာမရဲဘူးလေ” “ဟုတျကဲ့ရှငျ့” “အငျးငါလညျးဒါမြိုးမှသဘောကတြာ” “ဘယျလိုလဲအရငျကလုပျဖူးလား” “အရငျတော့မလုပျဖူးဘူး၊ဒါပမေယျ့အိမျထောငျရှိဖူးတယျ” “အော..၊နငျ့ပုံကသိသာပါတယျ။မလုပျဖူးမှနျး” “နငျ့ပုံကမွနျမာဆနျပွီးလှတယျဟ။ဘာလို့ဒီအလုပျလုပျလဲ” “ကမြလညျးအခကျအခဲရှိလို့ပါရှငျ” “အေးလဒေီနတေ့နလေုံ့းငါနမှော၊အေးအေးဆေးဆေးပေါ့။
ဝနျဆောငျမှု့ကောငျးရငျမုနျဘိုးပေးပါမယျ။” “ကမြကွိုးစားပါ့မယျ” “ဒါနှငျ့လီးစုပျဖူးတယျမဟုတျလား” “ရှငျ..မလုပျဖူးဘူး” “ဟအေိမျထောငျကဖြူးတယျဆို” “ဟုတျ..ဒါပမေယျ့မလုပျခဲ့ဖူးဘူး” “ငါကအဲဒါကိုသဘောကတြာ” “ကမြကွိုးစားပွီးလုပျပါ့မယျ” “အေးလေ.နငျလုပျပေးရငျမုနျဘိုးသပျသပျပေးပါ့မယျ” “ဟုတျကဲ့ရှငျ့” “ကဲအဝတျအစားတှခြှေတျပွီးသနျ့ရှငျးရေးလုပျလိုကျတော့၊ငါအရမျးလုပျခငျြနပွေီ” “ဟုတျကဲ့ရှငျ့” မလေေးသနျ့ရှငျးရေးလုပျရနျရခြေိုးခနျးဝငျလိုကျတယျ။စိတျထဲမှာဝမျးနညျးမှု့တှနှေငျ့ပေါ့။အဝတျအစားခြှတျပွီးသနျ့ရှငျးရေးလုပျတယျ။ပွီးတော့သဘကျတဈထညျပတျပွီးအိပျခနျးဖကျထှကျခဲ့ရတော့တယျ မလေေးမှာစိတျလှုပျရှားပွီးအခနျးထဲသို့ဝငျလာခဲ့တယျ။
အပွငျရောကျတော့ဟိုလူကွီးကအဝတျအစားတှခြှေတျပွီးကုတငျမှာကြျောမှီပွီးထိုငျနတေယျ။မလေေးလညျးစိတျထဲအားမှေးပွီးကုတငျအနားကိုသှားလိုကျတယျ “လာလညေီမ..ညီမလေးနာမညျဘယျသူလဲညီမ” “မလေေးပါရှငျ” “မလေေးမှတျထားနှျောအကိုကဦးကိုကိုအောငျပါ” “ဟုတျကဲ့ရှငျ” “လာပါဦးကှာ၊မငျးသဘကျကွီးခြှတျလိုကျပါအုံး” “ဟုတျ..ဟုတျကဲ့”မလေေးလညျးရှကျရှံစှာပငျသဘကျအားခြှတျလိုကျရတော့သညျ။ “အားးးမလေေး.ညီမကယောကျြားသာရထားတာ၊နို့တှကေအပြိုအတိုငျးပါလား။ခလေးမရဘူးလား” “ရဖူးပါတယျ၊နို့မတိုကျရလို့ပါ” “လာလအေနားကိုခဏလောကျနို့စို့ပေးမယျ” “မလေေးရှကျသှားတယျ၊ဘာပဲဖွဈဖွဈလုပျပေးရမှာမို့အနားကိုကပျလိုကျတယျ။
“အားးးအရမျးမိုကျတယျကှာလုံးကဈြကဈြကလေးနှငျ့မာနတောပဲ” “အဟငျးးး” “ပွှတျ..ပွှတျ.ပွှတျ” “အမလေးးးအိုးးးး.ကြှတျ..ကြှတျ..” မလေေးမှာယောကျြားနှငျ့ဝေးနတေော့နို့စို့ခံရတာနှငျ့ကာမစိတျကလေးဖွဈပျေါလာတယျ။ကိုယျဘာသာ.ဒီအလုပျမှာသာယာစိတျမမှေးလညျး.ယောကျြားမိနျးမဆုံတှပွေီ့းဒီလိုလုပျရမှာတော့စိတျကလှုပျရှားမိတယျလေ။စိတျထဲမှာတော့ “ခှငျ့လှတျပါမောငျ၊မလေေးမတတျသာလို့ပါလို့တောငျးပနျရငျးဦးကိုကိုအောငျကိုဝနျဆောငျမှု့ပေးနိုငျရနျသာစိတျထညျ့ရလသေညျ။ဦးကိုကိုအောငျးဒီလိုဟာမြိုးကိုကြှမျးကငျြသူဖွဈတဲ့အတှကျမလေေးစိတျပိုကွှလာဖို့သာကွံဆောငျပါတော့တယျ။ဘာပဲဖွဈဖွဈနှဈဦးသားစိတျတူကိုယျသူလိုးနီုငျရငျကာမအရသာကိုအပွညျ့အဝခံစားရရငျအကောငျးဆုံးလေ
“ပွှတျ..ပွှတျ..ပွှတျ” “အကျ့..ဟငျ့..ဟငျ့..” မိမိစိတျကိုမသာယာအောငျလုပျပမေယျ့ပထမဆုံးအတှအေ့ကွုံဖွဈ၍စိတျကိုထိနျးခြုပျမရနိုငျတဲ့အတှကျထိနျးထားသညျ့ကွားကမလေေးညညျးညူမိတယျ “ကိုကိုအောငျကတော့.နို့စှိုရတာဝါသနာပေါတော့စို့လိုကျခဲလြှာနှငျ့ယကျလိုကျမို့မလေေးတဈယောကျကာမနောကျကိုပါသထကျပါလာခဲ့ရပွီးခေါငျးမော့ရငျးတဟငျးဟငျးးညညျးလသေညျ။ဦးကိုကိုအောငျစိတျမှာလညျးဒီလိုအရိုငျးမလေးအားမိမိလိုရာဆှဲချေါနိုငျအောငျကွံစင်ျညအားထုတျရနျဆုံဖွတျလိုကျသညျ။နို့စို့ရငျးပငျမလေေးအဖုတျထဲလကျနှီုကျ၍ပိပျအားပှတျပေးလိုကျသညျ။ “အာ့..အကို…..အငျ့ဟငျ့..ဟငျ့” ပိပိထဲမှအရညျမြားထှကျသောအခါမှဦးကိုကိုအောငျကရပျလိုကျပွီး “မလေေးစုပျပေးတော့ကှာ” “ဟုတျ….ဟုတျကဲ့ပါ” မလေေးယောကျြားလီးကိုတောငျရှံလို့မစုပျခဲ့ဖူးတာ၊အခုတစိမျးလီးဆိုတော့ပိုဆိုးတာပေါ့။
ခြီတုံခတြုံစဉျးစားရငျး ယောကျြားရခှေငျ့လှတျပါလို့တောငျးပနျရငျးဦးကိုကိုအောငျလီးကိုငုံစုပျရလသေညျ။ဦးကိုအောငျလီးမှာမောငျ့လီးထကျကွီးသညျကိုသတိထားမိပွီးအံခငျြသောစိတျအားထိနျးခြုပျပွီးလီးအားငုံစုပျရငျး၊ဒါလညျးအသားခငျြးပါပဲလလေို့တှေးလိုကျရတယျ။စုပျရုံနှငျ့လီးထဲကအရညျတှလြှောပျေါရောကျလာတယျ။အရသာကငံပွပွနှငျ့အနံမရတာကွောငျ့ဆကျပွီးစုပျလိုကျတယျ “အားကောငျးတယျမလေေး၊ဒဈလေးကိုပါယကျပေးပါ” ဦးကိုကိုအောငျပွောသညျ့အတိုငျးဒဈပတျလညျလြှာနှငျ့ယကျပေးလိုကျရတာပေါ့ “အားးကောငျးတယျ.လီးထိပျဝကိုလညျးလြှာနှငျ့ထိုးပေးပါ” မလေေးသူပွောတဲ့အတိုငျးအဝကိုလြှာဖြားလေးနှငျ့ထိုးပေးလိုကျတော့” “အား.ကောငျးလိုကျတာမလေေးရာ၊လိုးတော့မယျမလေေး” “ဟုတျ.ဟုတျကဲ့” တကယျတနျးအလိုးခံရမယျဆိုတော့စိတျထဲမှာတမြိုးလေးခံစားရပွနျတယျရှငျ” “မလေေးဒီနရောမှာအိပျလိုကျ” “မလေေးသဘောပေါကျပါတယျသူပွကတညျးကကုတငျကနျ့လနျ့အိပျပွီးခွထေောကျကားလိုးမယျဆိုတာအဲဒါကွောငျ့ပုံစံကအြောငျလုပျပေးလိုကျရပါတော့တယျ။
မလေေးကအိပျရာပျေါလှလိုကျတော့ဦးကိုအောငျကမလေေးအဖုတျကိုကွညျ့တဲ့အခါအရမျးလညျးလှနသေလိုမွငျရတယျ။ဖောငျးမို့နတေဲ့ဆီးခုံနှငျ့အမှေးပါးလေးရယျ။အရှတျမပျေါတဲ့နှုတျခမျးသားကွီးတှမွေငျတော့တဏှာစိတျပွငျးတဲ့ဦးကိုအောငျဟာမနနေိုငျတော့ပဲကုတငျအောကျကနပွေီးလီးကိုကှနဒှနျစှပျကာမလေေးအဖုတျကိုလီးသှငျးလိုကျတယျ။ အလိုးမခံရတာကွာပွီဖွဈတဲ့အဖုတျထဲလီးကပွညျ့ကွပျပွီးဝငျလာတယျ၊မလေေးလညျးတခကျြတော့တှနျ့သှားတာပေါ့ “အာ့..” ကိုကိုအောငျလညျးပွညျ့ကပျြနတေဲ့အတှကျသဘောအတျောကသြှားပွီးလီးကိုဆောငျ့သှငျးလိုကျတယျ “ဗဈြ .ဗဈြ..ဘှတျ. “ “အာ့…အမလေူးူ” မလေေး.ကအမလေးတတော့ဦးကိုကိုအောငျပိုပွီးသဘောကတြာကွောငျ့။ဆကျတိုကျလိုပဲဆကျလိုးလိုကျတော့တယျ။
‘”ဗဈြ..ဗဈြ..ဘှတျ..ဘှတျ” “အာ့..အိုးးးရှီးးရှီးးအာ့ “ သုံးမိနဈလောကျမနားတမျးဆောငျ့လိုကျတယိ။မလေေးလညျးတဖွေးဖွေး..ကာမစိတျတှထေလာပွီးတပသျ့အငျ့ညညျးလာတော့တယျ။လီးကွီးကဝငျခညျြထှကျခညျြနှငျ့ဖီလငျတှဖွေဈပျေါလာပွီးမလေေးညညျးလာတယျ၊ခဈြသူမဟုတျပမေယျ့အဖုတျကတှောသူ့အလုပျကိုသူလုပျတာပါပဲ။လုပျတာကောငျးရငျကောငျးသလိုတုနျ့ပွနျတာဆိုတော့တဖွေးဖွေးနှငျ့ခံစားခကျြကမွငျ့တကျလာရတော့မလေေးမှာအိပျရာခငျးကိုသာတသယငျးတငျးလဆေုပျကိုငျပွီးနရေတယျ။ “ဘှတျ..ဖနျးးးဖနျးးး” “ဇှိ..ဗြိ…ဗြိ..ဗဈြ.” “အငျ့..ဟငျးးဟငျးးးးအာ့” ကိုကိုအောငျလိုးရငျးနို့စို့တယျ။မလေေးဒီတဈခါတော့နို့လညျးအစို့ခံရသလိုအလိုးလညျးခံရတဲ့အတှကျပွီးခငျြလာတော့တယျ။
“အာ့..အငျ့အာ့…ရှီးးးရှီးးးးးးး” “ဇှပျပျ..ဘှတျ..ဖတျ..ဖနျးးဖနျးးး” “အိုး…..အာ့..ရှီးးရှီးးးးးအားးးး” လိုးခြိနျဆယျမိနဈလောကျမှာမလေေးမထိနျးနိုငျတော့ပဲပွီးသှားပါတယျ။ဒါပမေယျ့ဦးကိုကိုအောငျကမပွီးသေးတဲ့အတှကျမလေေးမှာဖငျဘူးတောငျးထောငျပေးရတယျ။ ဦးကိုကိုအောငျဟာ..တဏှာစိတျကွီးသူမို့မလေေးဖငျဘူးတောငျးထောငျနတောကိုကွညျ့ပွီးလိုးရငျးမလေေးဖငျကိုတံတှေးထှေးလိုကျတယျ။မလေေးလနျ့သှားပွီး “ဖငျတော့အလုပျမခံနိုငျဘူးအကို” “အေးပါ” ဆိုပွီးဖငျဝနားလကျမထားကာတငျသားအားဆုပျကိုငျပွီးတဗငျြးဗငျြးလိုးပါတယျ “ခုဏတုနျးကမလေေးပွီးထားလို့အရညျတှထှေကျနတောကွောငျ့အဖုတျအဝမှာရှဲနတေော့တယျ။
ကိုကိုအာငျးလညျးလကျမနှငျ့သုတျပွီးမလေေးဖငျဝကိုလာပှတျပါတယျ။အရညျနှငျ့တံတှေးပေါငျးပွီးဖငျဝကခြောမှတျလာတယျ။ဖငျပွတိပွီးအလိုးခံရတော့ပိုယားသလိုပိုပွီးညညျးလာမိတယျ။ကိုကိုအောငျးလိုးရငျ့နှငျ့မလေေးဖငျထဲလကျမထညျ့တော့ “အာ့..အကိုမလုပျနှငျ့ရှငျ့ကမြနာလို့ပါ။ကိုကိုအောသျကလကျမပွနျမနှုတပဲဆကျတိုကျလိုးလိုကျတယျ “ပျ..ဘှတျ..ဖတျ..ဖနျးးဖနျးးး “အငျ့..ဟငျးးဟငျးးးးအာ့” “ဇှပျပျ..ဘှတျ..ဖတျ..ဖနျးးဖနျးးး” “အိုး…..အာ့..ရှီးးရှီးးးးးအားးးး” ဆယျမိနဈလောကျလိုးပွီးသောအခါဦးကိုကိုအောငျပွီးသှားပါရတော့တယျ” ဦးကိုကိုအောငျရောမလေေးပါရခြေိုးခနျးဝငျပွီးသနျ့ရှငျးရေးလုပပွီး၊နလေ့ညျစာကိုဟိုတယျမှာပွီးစားသောကျလိုကျကာနလေ့ညျထမငျးစားကာတရေးအိပျလိုကျကွပွီးညနရေောကျမှနှဈကွိဆကျလိုးလိုကျကွပွီးအိမျကိုပွနခဲ့တော့တယျ။
နောကျတရကျနှဈရကျအကွာမှာသူငယျခငျြးဆီကဖုနျးလာတယျ။ “မလေေးပှဲဖွဈတယျ” “ဟုတျလား၊နငျဟိုတနကေ့တျောတောရလိုကျတယျမလား” “အေး.ရလိုကျတယျ” “ဦးကိုကိုအောငျကသူသာမကသှူရဲ့ပါတနာတှပေါချေါလာတတျတယျ၊လူကွီးပိုငျးတှေ၊ဂှငျရိုကိရငျးဧညျ့ခံတာ။သူကပိုကျဆံပိုပေးတတျပါတယျ” “ဟုတျလား” “အေးတဈခါတခါနိုငျငံခွားသားလညျးပါတယျ” “ဩျော…” “အေးဒီတဈခါနိုငျငံခွားသားပဲ၊ငါ.ငါးရာတောငျးထားတယျ၊သုကလညျးပေးမယျတဲ့၊မွနျမာပွညျရောကျတုနျးမွနျမာမကိုလုပျကွညျ့ခငျြတာတဲ့၊မွနျမာဆနျတဲ့မိနျးကလေးမြိုးလိုခငျြတဲ့ဟဲ့”
“အေးလငေါလာခဲ့မယျ၊အခြိနျက” “မနကျကတညျးကပဲ” “အေးအေး” မလေေးမရှကျနိုငျတော့ပါ၊မရရအောငျငှရှောရတော့မယျ။တနကေ့အလုပျလကျခံပွီးကတညျးကစိတျရဲရဲနှငျ့လုပျတော့မယျဆုံးဖွတျလိုကျတယျ” နောကျနစေ့ောစောပဲဟိုတယျကိုသှားလိုကျတယျ “သူငယျခငျြးကအခနျးနံပါတျပွောထားလို့တဈခါတညျးသှားလိုကျတာပါ။စိတျထဲမှာတော့ကွောကျမိတယျ၊နိုငျငံခွားသားဆိုတော့လူကောငျထှားတယျလေ။ “အခနျးတံခါးကိုခေါကျလိုကျတော့လာဖှငျ့တယျ” “မငျးမလေေးဟုတျတယျမလား” အင်ျဂလိပျလိုပဲပွောတာပါ။
လူကအရပျခွောကျပနေီးပါးလောကျရှိတယျ။ “ဟုတျတယျ၊မစ်စတာ” “မငျးသိပျလှတာပဲ” ကမြရယျပွလိုကျတယျ၊အီးမဂြောနှငျ့ကြောကျးပွီးပမေယျ့နားလညျတာတော့နားလညျပါတယျ၊ပွနျပွောဖို့ခကျနတောကွောငျ့ရယျပဲပွလိုကျတယျ။နားလညျရငျYesပေါ့။ “ငါမငျးလိုမြိုးကိုကွိုကျတယျ “အငျး” “မငျးလိုမွနျမာဝတျစုံနှငျ့ဆိုတော့ငါအရမျးစိတျလှုပျရှားတယျ၊ငါမငျးအဝတျတှခြှေတျလိုကျမယျနှျော” “အငျး “နိုငျငံခွားသားကအဝတျတှကေိုတလှာခငျြးခြှတျခပြွီး” “သိပျကောငျးတာပဲ” “ငါစိတျအရမျးလှုပျရှားလာပွီ” “လာပါ.မလေေး” မလေေးမှာအဝတျအစားမရှိတော့ပဲ၊သူချေါရာအိပျရာထဲကိုရောကျခဲ့ပွီးအိပျရာပျေါလှဲခလြိုကျတယျ။
အဲဒီလူကမလေေးခါးအောကျခေါငျးအုံးခုလို့မလေေးခါးကွှပေးလိုကျရတယျ” သူလိုးတော့မယျထငျတယျ၊မမှုတျခိုငျးတော့ဘူးလားမလေေးတှေးမိတာ။ ဟငျအထငျနှငျ့အမွငျလှဲသှားပါလား” “အာ့…” ဟိုကမလေေးပိပိကိုယကျလိုကျခွငျးပါ။လြှာကွမျးကွီးနှငျ့ယကျတာခံလိုကျရတဲ့ကမြခါးပါကော့သှားတယျ “ပလပျ..ပလပျ.” “အငျ့…အငျးးဟငျ့..အာ့.” အရသျကယောကျြားကိုဘုနျ့မှာစိုးလို့မလုပျခိုငျးခဲ့တာ၊အခုတောမလေေးတဈယောကျအိပျရာခငျးကိုဆုပျကိုငျပွီးအျောနရေပွီလေ၊
ဟိုကပိပိထဲလကျကလေးထိုးပွီးအစကေို့စုပျလိုကျတာ “ပွှတျ..ပွှတျ..ပွှတျ” “အာ့..အမလေး…..ထှကျကုနျပါပွီ..အား” မလေေးစိတျမထိနျးနိုငျပဲအျောညညျးလိုကျပါတော့တယျ။တဈသကျမှာဒီတဈခါပဲအယကျခံဖူးလို့အရငျကအယကျမခံဖူးတာတောငျနောငျတရခငျြသှားတယျလေ။ “မလေေးငါ့ကိုစုပျပေးပါ” “အငျးး” မလေေးကသူ့ဘောငျးဘီကိုခြှတျလိုကျပွီးကွညျ့လိုကျတော့လီးကဦးကိုကိုအောငျလောကျပါပဲ။
ဒါပမေယျ့ရှညျတယျအ ကွီးကွီးမဟုတျဘူး။ ကမြလညျးဦးကိုကိုအောငျသငျပေးတဲ့ပုံတှအေတိုငျးလုပျပေးလိုကျတာပေါ့။ရှံတော့ရှံတယျ၊ဒါပမေယျ့သူ့လီးကဦးကိုအောငျလိုညိုညိုကွီးမဟုတျဘူး၊ဖွူဖွူဖှေးဖှေးပါပဲ၊နောကျတော့သူကကမြကိုလိုးဖို့လုပျပါတယျ။ “မလေေး.ငါ့အပျေါကလုပျပေးပါ” ကမြလညျးဒီလိုမြိုးလုပျဖူးပါတယျ။အဲဒီတော့ကမြလညျး သူ့အပျေါကခှပွီးလီးကိုကိုငျထညျ့လိုကျလိုကျတယျ” “ဗဈြ….ဗဈြ…ဗဈြ” “အာ့..ကမြအဆုံးအထိမထိုငျရဲဘူး၊ကွောကျတယျလေ၊ “ကမြကသူ့ရငျဘတျပျေါလကျထောကျပွီးအဆုံးအထိမဝငျအောငျလုပျသေးတယျ။ “ဗဈြ..ဗဈြ….ဗဈြ” “အာ့..အငျ့.” အောကျကနပွေီးတော့ကမြထိုငျအခမြှာအပျေါကိုပငျ့ပွီးလိုးတော့ကမြတခကျြအောငျ့သှားတယျလေ။သားအိမျမြားထိသှားသလားမသိဘူး” “နောကျတော့သူကအောကျကနပေငျ့ပွီးလိုးတော့တယျ။ကွာတော့လညျးခံနိုငျသှားပွီးကာမအရသာကတှလေ့ာတော့တယျ။
ကမြလညျးမွနျမွနျပဲအပျေါကဆောငျ့ခပြေးလိုကျတယျ။ပိပိထဲလီးဝငျသံတှကေတဘှတျဘှတျတဇှပျ..ဇှပျနှငျ့ပေါ့ “ဗြိ..ဗွိ.ဗဈြ..ဗဈြ..ဘှတျ..ဖတျ..ဖနျးးဖနျး” “အငျ့..ဟငျ့..ဟငျ့.” သူကကမြကိုကမြကိုရပျခိုငျးပွီးခါးကိုဖကျကာ၊ကုတငျအောကျကိုဆငျးတယျ။လီးကြှတျမှာစိုးလို့ခါးကိုတငျးတငျးဖကျထားတာပါ။ရှညျလြားတဲ့လီးကအပွငျကိုကြှတျမထှကျပါဘူး” ကုတငျပျေါကနအေောကျကိုဆငျးတော့ကမြကသူ့လညျပငျးကိုဖကျထားတယျ။သူကကမြပေါငျအောကျကလကျဝငျလြှိုကာကမြကိုမပွီးပငျ့လိုးရောကမြဖငျကိုအတငျအခလြုပျပွီးလိုးပါတော့တယျ။ကမြစိုးရိမျတာကှနျဒှနျပေါကျငှားမှာကိုပါ။ဒီအလုပျကရောဂါရဖို့လှယျတယျ။ကမြကွောကျတယျလေ။သူကကမြကိုခြီပွီးရှဈမိနဈခနျ့လိုးလိုကျတော့ကမြလညျး ပွီးသှားပါတော့တယျ။
မနားလို့လညျးမဖွဈဘူး၊မိနျးမဓမ်မတာလာနတေယျလေ၊လာပွီးသုံးရငျလောကျကွာတော့ဦးကိုကိုအောငျဆီကဖုနျးလာတယျ “ဟလို” “ဟုတျကဲ့ပွောပါရှငျ့” “မလေေး.ငါကိုကိုအောငျ” “ဟုတျကဲ့” “ငါအရမျးအရေးကွီးတယျ၊နပွေညျတျောခဏလာခဲ့” “ဟငျးးးကမြနယျကိုမလိုကျခငျြဘူး” “တပတျလောကျပါဟ” “အိမျကထှကျဖို့အဆငျမပွလေို့” “လာခဲ့စမျးပါ.ကွိုကျဈေးတောငျးဟာ” “ငါလူတဈယောကျဧညျ့ခံစရာရှိတယျ” “အငျးးးး” “ငါဆယျသိနျးပေးမယျ.သုံးရကျပဲ” “နညျးတယျ” “အရေးကွီးပါတယျဆိုမှဆယျ့ငါးသိနျးဟာ” “ဒါဆိုလညျးပွီးရော” ကမြနပွေညျတျောသှားတော့ဘောဂသီရိမှာဦးကြိုကိုအောငျကိုယျတိုငျကားနှငျ့လာချေါပွီးမောငျ့ပလဲစငျ့ဟိုတယျချေါသှားတယျ။အဲဒီကလူရှငျးတော့သူကအဲဒီမှာလူကွီးတဈယောကျဧညျ့ခံမှာပေါ့ “ကမြရောကျသှားတော့”
“အား.ခငျမြားရှေးတတျသားပဲကိုအောငျ’” “ဆရာသမားအကွိုကျသိတယျလေ” “စိတျကောခရြရဲ့လား” “ဟိုတပတျကမှသူကစလုပျတာဗြ။ကနြျောပထမဆုံးပဲ” “ဟုတျလား” “ဗမာဆနျဆနျဆိုတော့ရှယျပဲဗြ” “ကဲပါဆရာသမားပဲသုံးပါ။ကနြျောသိတျခရြလို့ချေါထားတာ။ဈေးကွီးအဖိုးကောငျးတယျ” “ဟငျးးးဟငျးးး” “မလေေးငါသှားတော့မယျ၊ငါ့ဆရာကိုသခြောပွုစုလိုကျ” “ဟုတျကဲ့” “မလေေးဟုတျလားညီမ..ဟုတျတယျရှငျ့” “အေး..ငါ့ကိုလညျးမှတျထညးထား၊ကိုမွငျ့မောငျတဲ့” “ဟုတျကဲ့” ညရောကျတော့ကိုမွငျ့မောငျမူးမူးလေးနှငျ့ရောကျလာပွီး “မလေေး.စရအောငျ” “ဟုတျကဲ့ရှငျ့” “လာကှာငါ့အဝတျတှခြှေတျပေးစမျးပါ။” “မလေေးလညျးထြှတိပေးလိုကျတယျ၊ဒီလူတှကေအစိုးလုပျငနျးတှကေိခွှငျယူတဲ့လူတှေ၊ငှပေေါတယျလေ၊ “မလေေးငါ့ကိုစုပျပေးစမျးပါအုံးဟာ” ကမြလညျးတဖွေးဖွေးနှငျ့လီးကိုမရှံတော့ဘူး၊ယောကျြားတှတေဏှာထမှပိုကျဆံမြားမြားရမှာလေ၊ဒီတော့လညျးသူတို့လီးအမွဲတောငျနိုငျပါစလေို့ပဲဆုတောငျးရတယျ။
ကမြလညျးသူကနြေပျသညျအထိလီးစုပျပေးရတယျ။ “မလေေး’” “ရှငျ.” “နငျဖငျခံဖူးလား” “မခံဖူးပါဘူးရှငျ့” “ငါကသူမြားမလုပျဖူးတာပဲလုပျခငျြတာ” “မလုပျပါနှငျ့ရှငျ၊ကမြကွောကျလို့ပါ’ “အေး.ငါပိုကျဆံငါးသိနျးပေးမယျ၊နငျဖငျခံမလား” “အမလေး.တှေးပွီးကွောကျမိတယျ၊ဒါပမေယျ့တဖကျကလညျးငါးသိနျးတဲ့၊ပိုကျဆံပေါတဲ့လူတှမှေိုသာပေးနိုငျတာ။ “တကယျပေးရငျ.လုပျပေးပါ့မယျ” “ရော့ငါ့ပိုကျဆံအိပိငါသိနျးယူလိုကျ” “ငါမေးပွီးပွီကိုအောငျကို နငျဖငိမခံဖူးဘူးဆိုလို့လုပျခငျြတာနငျ့ဖ၊ငျကအပြိုပဲရှိသေးတာ” “ဟုတျကဲ့.” “ဒီလိုမှပေါ့” ကမြသားရှရေ့ေးအတှကျဖငျမခံဖူးပမေယျ့ခံလိုကျမယျလို့ဆုံဖွတျလိုကျတယျ။သူ့ကိုသူကနြေပျတဲ့အထိစုပျပေးလိုကျတယျ၊ “မလေေးနငျ့ဖငျကိုကုနျးခမြှာနှေိာ” “ဟုတျကဲ့ရှငျ့”ကမြလညျးကုနျးပေးလိုကျတယျ” ကိုမွငျ့မောငျတဈယောကျနောကျကနပွေီးကုနျးကာလီးကိုသှငျးမယျ့ဟနျပွငျနတေယျ။
ကမြလညျးဖငျထဲလီးဝငျမဲ့အခြိနျကိုသာကမြရငျတထိတျထိတျနှငိ့စောငျ့နမေိတယျ၊ သူကကမြဖငျဝကိုတံတှေးထှေးလိုကျကာလီးကိုစအိုဝအားဖွတျပွီးရှတေို့းနောကျဆုတျလုပျနတော၊လေ။နောကျကတြော့လီးကိုငျပွီးကမြဖငျအအိုဝကိုလီးကိုတော့ပွီးသှငျးတယျ။ ပွှတျ” ပှတျ” “အားးးးနာတယျ..အားးး” ကိုမွငျ့မောငျကမညှာတော့ဘူးမရမကအထဲကိုလီးအဆုံးထိသှငျးတော့တယျ ကိုမွငျ့မောငျလိုးလိုကျတော့ကမြဖငျထဲမှာပူကနဲမီးစနှငျ့ထိုးသလိုခံစားလိုကျရတယျ။အဝမှာစပျဖဉျြးဖဉျြးခံစားရပွီးအထဲရောကျတော့အောငျ့ပွီးခံစားရတယျ “အာ့အကို..ခဏ” “ဗဈြ…ဗဈြ..ဘှတျ..ဘှတျ” “အာ့အမလေး..အငျ့..အိုး” “ခဏနပေါအုံး….အ.အား” ကမြမကျြရညျတှပေါထှကျတယျရှငျ။နောငျတော့လညျူတဖွေးဖွေးသကျသာလာတယျ။
ရောဂါကကြှမျးသှားပါပွီ၊ယောကျြားပွောငျးလာတဲ့အခါကမြကဆေးရုံမှာပကျလကျကလေးနှငျ့ပေါ့ “မလေေး” ကနြေျာ့တို့သားအဖထားခဲ့ပွီဗြာ”အီးဟီးးးးး ‘”မေ..မေ..” “သမီး..” ကဲအားလုံးပွနျရအောငျ” ကိုမငျးသူလညျးပူဆှေးသောကရောကျရတယျ။ရကျလညျပွီးမှမလေေးသတ်ေတာရှာတော့မှသားအတှကျငှတှေဘေဏျမှာအပျခဲ့ကွောငျးသိရပါတော့တယျ။
“မေလေး” “ရှင့်” “မောင်တို့လက်ထပ်ရအောင်၊မောင်အလုပ်ရပြီ” “မောင်ဖေဖေနှင့်မေမေကိုပြောလေ” “အေးပါကွာယောက်ခမကြီးတွေကသလောတူပြီးသားပါ” မေလေးမှာအသားဖြူပြီးအရပ်ငါးပေလေးလက်မလောက်ရှိပြီးလှပသောကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ရှိပါတယ်။မျက်နာချိုပြီးအသားအရေဝင်းပဖြူစင်တဲ့အသားအရေရှိတယ်။မြန်မာဝတ်စုံလိုကိုယ်လုံးပေါ်လွှင်စေသောအဝတ်အစားဝတ်ကမြင်သူတိုင်းနှစ်ခါလောက်ပြန်ကြည့်ရတဲ့သူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာအဓိကနှင့်ဘွဲ့ရတယ်။ကိုမင်းသူနှင့်တက္ကသိုလ်ကတည်းကချစ်ခဲ့ရပြီး၊ကိုယ်မင်းသူအလုပ်ရရင်လက်ထပ်မယ်ရည်စူးခဲ့ကြတဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်ကြတယ်။ကိုမင်းသူကအနေအေးတဲ့သူဖြစ်တော့မိဘတွေကလည်းသဘောတူပြီးသားဖြစ်တော့သိပ်မကြာခင်မှာပဲရုံးတက်လက်မှတ်ထိုးကြပြီးအိမ်မှာပဲ မင်္ဂလာဆောင်ဖြစ်ကြတော့တယ်။
“မင်္ဂလာဆောင်တော့လည်းအရင်ကစည်းရှိကြတော့တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးမလွန်ကျူးခဲ့ကြပါဘူး” “မေလေး” “ရှင်..မောင်” “မင်္ဂလက်ဖွဲ့တွေလည်းဖောက်ကြည့်ပြီးပြီမဟုတ်လား” “အင်း.လေမောင်” “မပင်ပန်းဘူးလား” “အင်း.ပင်ပန်းတာတော့ပင်ပန်းပါတယ်” “အဲဒါဆိုအိပ်ကြရအောင်ကွာ၊မောင့်အချစ်ကလေးကိုကြင်နာချင်ပြီ” “ရှူးတိုးတိုး.မေမေတို့ကြားပါ့မယ်” “သူတို့နားလည်ပါတယ်မေလေးရယ်” “အော်သိတာသိစေမမြင်စေနှင့်တဲ့မောင်” “လုပ်ပါကွာအိပ်ရအောင်” “မောင်ကလည်း..သိပ်ကဲတာပဲ၊ဒီပစ္စည်းတွေသိမ်းလိုက်ပါဦးမယ်” အမှန်တော့မေလေးတစ်ယောက်ရင်တွေခုန်နေပြီး၊ရှက်နေလို့ဒီအလုပ်တွေလုပ်နေတာပါ၊အခုတော့အဲဒါတွေသိမ်းရင်းအချိန်ကဆယ်နာရီကျော်နေပြီ။မေလေးကပစ္စည်းတွေသိမ်းပြီးဍှက်နှာသစ်ခြေဆေး၊သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးမှအိပ်ခန်းထဲဝင်လာလိုက်တယ်။ပြီးတော့ညဝတ်အင်္ကျီလေးဝတ်မလို့လုပ်တော့.မောင်ကကြည့်နေလို့နည်းနည်းရှက်သွားတယ်။
“မောင်..ဘာလို့ကြည့်နေတာလဲ၊ဟိုဘက်လှည့်ကွာ၊မေလေးရှက်တယ်” “မင်းသူလည်း “အေးပါကွာ”ဆိုပြီးတဖက်လှည့်ဟန်ပြုပြီးမေလေးမပြီးခင်လှည့်ကြည့်တယ်” “ဟင်းမောင်နှော်”ဆိုပြီးအဝတ်ဟောင်းတွေကိုကုတင်ခြေရင်းကအဝတ်စင်ပေါ်ခေါက်တင်လိုက်တယ်။ပြီးတော့မှချစ်သူလင်ကိုကန်တော့ပြီးကုတင်ပေါ်လှမ်းတက်လိုက်တယ်။မင်းသူလည်းကုတင်ပေါ်တက်လာသောမေလေးအားကြင်နာစွာပွေ့ဖက်ပြီးပါးနှစ်ဖက်ကိုမွေးကြူရင်း “သိပ်လိမ္မာတဲ့မိန်းမလေးရယ်”။လို့ပြောလိုက်ပြီးကုတင်ပေါ်လှဲချလိုက်တော့တယ် “အမယ်နဂိုကတည်းကလိမ္မာပြီးသားပါနှော်” “အေးပါကွာ” ကိုမင်းသူကမေလေးနှုတ်ခမ်းအားစုပ်ယူနမ်းရှိုက်တဲ့အခါမေလေးလည်းပြန်လည်နမ်းလိုက်တယ်။မေလေးရောမင်းသူပါရင်ခုန်မှု့တွေနှင့်တစ်ဦးကိုတစ်ဦးကြင်နာစွာပွေ့ဖက်နမ်းရှိုက်နေကြရင်းမင်းသူကကျော့ရှင်းပြီးသွေးစိမ်းကြောမြမြလေးပေါ်နေတဲ့မေလေးရဲ့လည်တိုင်ကလေးကိုငုံခဲပြီးစုပ်ယူလိုက်တယ်။ “အို..မောင်ရယ်” မေလေးမှာအလိုးခံရမည်ကိုကြိုသိပြီးပိုပြီးရင်ခုန်မှု့တွေနှင့်အတူ၊မိန်းမောစပြုလာပါတော့တယ်။
“မင်းသူလည်းမေလေးအင်္ကျီကိုအပေါ်တွန်းတင်ကာ၊ဘရာအားချွတ်ရင်မေလေးနောက်ကျောသို့လက်လှမ်းလိုက်ပြီးအင်္ကျီချိတ်အားဖြုတ်ရာမေလေးပဲအိပ်ရာမှထပြီးဖြုတ်လိုက်ရတယ်။မေလေးဘရာချိတ်ဖြုတ်တုန်းမှာပဲမေလေးအကျီကိုခေါင်းကနေချွတ်ဖို့ကြိုးစားလိုက်တယ်။ဘရာချိတ်ဖြုတ်လိုက်တဲ့မေလေးအကျီင်္ပါတစ်ခါတည်းချွတ်လိုက်တော့၊ဖြူးဖွေးဝင်းပတဲ့လုံးကျစ်ကျစ်ရင်နှစ်မွှာဟာအပြင်သို့ထွက်လာတော့မင်းသူလည်းထိုထိုသောနို့နှစ်လုံးအားသေသေချာချာကြည့်ပြီးစို့လိုက်တယ်” “ပြွတ်..ပြွတ်..ပြွတ်” “အာ့မောင်ရယ်..ကျွတ်..ကျွတ်” “မေလေးတစ်ယောက်စုပ်သတ်ပြီးညည်းညူမိတယ်။အပျိုစင်နို့ပီသစွာပဲစုချွန်နေတဲ့နို့သီးတွေကစူထွက်လာရင်းတသိမ့်သိမ့်တလှိုက်လှိုက်တက်လာသောကာမစိတ်ကြောင့်ညည်းညူမိရလေသည်။ “ပြွတ်..ပြွတ်…ပြွတ်” “အင့်..ဟင်းးဟင်းးးးး” မင်းသူလည်းမေလေးချိုချိုကိုလျှာနှင့်ယက်လိုက်စို့လိုက်နို့အုံလိုက်ငုံလိုက်ခဲလိုက်လုပ်နေသဖြင့်မေလေးမှာပိပိထဲအရည်တွေစိမ့်ထွက်လာမှန်းသိပြီးရှက်သွေးဖြာသွားလေသည်။ မင်းသူလည်းမေလေးလုံချည်ကိုအသာဖြေကာချွတ်သောကြောင့်မေလေးလည်းခါးကိုကြွပေးလိုက်ရပြီး။
မင်းသူကမေလေးအဖုတ်ကိုအတွင်းခံဘောင်းဘီထဲလက်သွင်းပြီးအမွေးနုလေးများကိုပွတ်သတ်ပေးရာ။မေလေးမှာဓာတ်လိုက်သကဲ့သို့တချက်တွန့်သွားပြီးပိပိထဲမှအရည်ကြည်ချောဆီလေးစိမ့်ထွက်သွားသည်။ပိပိအကွဲကြားလက်သွင်းပြီးမင်းသူမှာမေးလေးနို့ကိုစို့လိုက်သည်။မေလေးလည်းဖီလင်တက်သထက်တက်လာပြီး”အော်ညည်းသံလေးပေးမိလေသည်။ မင်းသူကမေလေးအတွင်းခံကိုချွတ်လိုက်သဖြင့်မေးလေးဒုတိယအကြိမ်..ဖင်ကိုကြွပေးရပြန်သည်။ပိပိမှာလည်းဖြူဖွေးဝင်းဝါနေပြီးနှုတ်ခမ်းသားများမှာပန်းနုရောင်ပြေးနေလေသည်။မင်းသူမာချစ်ရ၏ပိပိလှလှလေးကိုမြင်ပြီးယက်ပေးချင်သောစိတ်တဖွားဖွားဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည် “မေလေးပိကိုနမ်းချင်တယ်ကွာ” “မလုပ်ပါနှင့်မောင်” “မေလေးပြန်မလုပ်ပေးချင်ဘူးမောင်” “မေလေးကလည်းကွာလင်မယားတွေဖြစ်ပြီးမှကွာ” “မလုပ်ပါနှင့်မောင်ရယ်၊မောင်လည်းဘုန်းနိမ့်မယ်၊မေလည်းလည်းငရဲကြီးပါ့မယ်” “လုပ်ပါကွာ” “မေလေးမလုပ်ပါရစေနှင့်မောင်ရယ်” “မေလေးမလုပ်ချင်လည်းမောင်အတင်းမတိုက်တွန်းချင်ပါဘူးလေ၊မောင်တော့လုပ်ပါရစေ”
“အာ.မောင်မေလေးကိုငရဲမပေးပါနှင့်မောင်” မင်းသူလည်းမေလည်းအားမပြောတော့ပဲမေလေးပိပိအားအတင်းယက်လိုက်သည်” “မလုပ်ပါနှင့်မောင်မေလေးတကယ်စိတ်ဆိုးမှာနှော်” မင်းသူလည်းဆက်မလုပ်ရဲတော့ပဲ၊မေလေးပေါင်ကြားထဲဝင်ကာမေလေးပိပိအားလိုးချလိုကိသည် “ဗျစ်..ဗျစ်…ဗျိ.ဗြစ်..ဗြစ်” “အားဖြေးဖြေးလုပ်ပါမောင်” “ဗျစ်…ဖျစ်..ဖောက်” “အိုး..မောင်ရယ်နာလိုက်တာ” “ခဏလေးပါစလုပ်ရင်ဒီလိုပဲနာတယ်လေ၊အပျိုစစ်အမှေးပါးကိုဖောက်တာလေ” “သွေးတွေများထွက်ကုန်ပလားမောင်” မင်းသူလီးကိုအပြင်ဆွဲထုတ်ပြီးကြည့်လိုက်တယ်။ “သွေးစလေးလောက်ပါကွာ” “အများကြီးထွက်လာသလား” “စိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူးမေလေးရာ” ဆိုပြပီးမင်းသူတစ်ယောက်ဆက်တိုက်ပဲလိုးလိုက်တယ် “ဘွတ်..ဖတ်..ဖတ်..ဘွတ်” “အင့်ဟင့်အင့်” “မင်းသူးလည်းဆက်တိုက်ဆိုသလိုလိုးလိုက်ရာသိပ်မကြာခင်မှာပဲနှစ်ဦးသားပြိုင်တူပြီးသွားကြလေသည်။
“ ချစ်ခင်စကြင်နာစဆိုတော့စိတ်တူကိုးယ်တူနှစ်ဦးသဘောတူ လိုက်ကြရာ။မေလေးမစုပ်ပေးသည်မှအပကျန်သည့်ပုံစံမျိုးစုံဖြင့်လုပ်ဖြစ်ကြလေသည်။အိမ်ထောင်သက်ကြာလေသံယောဇဉ်တွေခိုင်မြဲပြီးလေးလလောက်တွင်မေလေးတစ်ယောက်ကိုဝန်ရရှိလေသည်။နားလည်မှု့အပြည့်ပေးနိုင်သောမင်းသူအားမေလေးမှာအချစ်တွေပိုခဲ့သည်။ကိုယ်ဝန်ရလာပြီဖြစ်သောကြောင့်အနာဂတ်အတွက်မျှော်တွေးပြီးပျော်ခဲ့ကြသည်။သားလေးဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သမီးလေးဖြစ်ဖြစ်လိုချင်ကြသည်မှာဓမ္မတာပင်ဖြစ်သည့်အလျောက်အနာဂတ်စီမံကိန်းများချမှတ်ရင်းနှစ်ဦးသားပျော်ခဲ့ကြလေသည်။ ကလေးလေးမွေးသောအခါကျတော့သားယောက်ကျားလေးဖြစ်ပြီး၊မေလေးမှာနို့ချိုတိုက်ကျွေးရန်အခွင့်မသာပဲဖြစ်ရသည်။မေလေးမှာနို့မထွက်ပေ။သိုသေ့ာ်လည်းမေလေးကလေးအတွက်ကိုယ်တိုင်နို့ဘူးဖျော်ပြီးပြုစုခဲ့ရာယခုဆိုလျှင်ကလေးလေးမှာမူကြိုပင်တက်ရတော့မည့်အနေအထားပင်ဖြစ်သည်။မေလေးအသက်မှာနှစ်ဆယ့်လေးခန့်ဖြစ်လေရာ။တသားမွေးတသွေးလှဖြင့်စိုစိုပြေပြေပင်လှလာသည်။
နို့တိုက်ကျွေးရခြင်းမရှိသဖြင့်နို့မှာလည်းအပျိုကတည်းကလိုဖြစ်နေသည်။မင်းသူမှာလည်းရာထူးတိုးဖြင့်နောင်ချိုသို့ပြောင်းသွားသဖြင့်မေလေးမှာမိဘနှင့်အတူသားလေးအားမူကြိုထားပြီးရန်ကုန်တွင်သာကျန်ရစ်ခဲ့လေသည်။တနေ့တော့ ခေါင်းလျော်ရင်းလည်ပင်းဆံစအားကုတ်ခြစ်ရာမှဘုသေးသေးနှစ်လုံးအားတွေ့ရသဖြင့်ဆေးခန်းပြရာတွင်၊ဆရာဝန်မှ “ညီမလေး.ဆရာကဒါလေးကိုဘိုင်အိုစီလုပ်ချင်တယ်” “ရှင်စိုးရိမ်ရလို့လားဆရာမ” “အင်းညီမလေးအဆီကျိတ်ကလေးဆိုရင်တော့ပြသနာမရှိဘူးပေါ့” “ကဲညီမလေးဂျိုင်းအောက်ခဏကြည့်ရအောင်” “ဟုတ်ကဲ့ဆရာမ” ဆရာဝန်လည်းစမ်းပြီးနောက် “ညီမလေး.ဒီမှာလည်းတွေ့တယ်” “ရှင်” “ညီလေးအမပေါင်ခြံကိုစမ်းကြည့်မယ်သိလား” “ဟုတ်ကဲ့ရှင့်” “ပေါင်ခြံလည်းစမ်းပြီးနောက်” “ညီမလေးသေချာတယ်၊ဘိုင်အိုဆီပဲလုပ်လိုက်ပါညီမ” “ဟုတ်ကဲ့ရှင့် ဒီလိုနှင့်နောက်တရက်ခွဲစိတ်ခန်းဝင်ပြီးပေါင်ခြံနေရာအားခွဲစိပ်ကာအသားစယူပြီးဓာတ်ခွဲခန်းသို့ပို့ရာအဖြေလွှာများရလေသည်။
အဖြေလွှာအားဆရာမဆီပြရာ “ညီမလေးစိတ်မကောင်းပါဘူးညီမလေး” “ရှင်” “အမဆရာဆီစာရေးလိုက်ပါ့မယ်သွားလိုက်နှော်” ဆရာပေးသောစာနှင့်ဆရာမညွှန်ပြသောဆရာဝန်ကြီးနှင့်တွေ့ရာ။ကင်ဆာရောဂါကုသောဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာစိုးအောင်ဖြစ်နေသောကြောင့်စိုးရိမ်စိတ်ဝင်ရလေပြီ။ ဆရာဝန်ကြီးက “သမီးအဖြေလွှာမှာကင်ဆာလို့ရေးထားတယ်သမီး” “ရှင်” “ဒါဆိုကျမသေရတော့မယ်ပေါ့ဆရာကြီးရယ်” “အဲလိုချည်းပဲမဟုတ်ဘူးသမီးဒီကင်ဆာကသငံရည်အကျိတ်ကင်ဆာလို့ခေါ်တယ်။ဖြစ်တာနည်းနည်းကြာပြီ၊မကုရင်တောင်လေးငါးနှစ်လောက်နေရပါတယ်။ကုသရင်ပျောက်လိမ့်မယ်လိုထင်တယ် “ရှင်” မေလေးတစ်ယောက်မြင်းမိုရ်တောင်ပြိုလဲသကဲ့သို့ဖြစ်ရပြီ။ကလေးမျက်နှာမြင်ယောင်ရင်း “သားလေးရယ်၊အမေသေတာအရေးမကြီးပါဘူး၊ငါးသားတစ်ယောက်အမိမဲ့သားရေနည်းငါးဖြစ်ရတော့မယ်သားသားရယ်”လို့တွေးရင်းအိမ်အပြန်လမ်းတလျောက်အားရအောင်ငိုရင်း၊အိမ်အခြေအနေကလည်းဒီရောဂါဆိုးကုရလောက်အောင်ငွေကမရှိ၊ကုသရရင်ရောပျောက်မယ်လို့အာမမခံနိုင်၊မေလေးမှာမိမိအတွက်မပူပဲသားလေးအတွက်သာပူပင်ရလေသည်။
အိမ်ရောက်ကလည်းမိဘနှစ်ပါးစိတ်ဆင်းရဲရမည်ဖြစ်၍မပြောပဲဘာလုပ်ရမလဲစဉ်းစားကာ၊အပူရုပ်ကိုဟန်လုပ်နေရတော့သည်။ မေလေးတစ်ယောက်မှာစဉ်းစားရခက်နေပြီ။ “အင်း..ငါ့ဘဝကလည်းဆိုးလိုက်တာ၊သားလေးအနာဂတ်အတွက်ရော၊ဖေဖေနှင့်မေမေတို့အတွက်ရော၊ဟူး..ငါဘယ်လိုလုပ်ရပါ့မလဲ၊ငါသေသွားရင်ငါ့သားလေးဒုက္ခရောက်ရမယ်။အင်းမိခင်သောကဆိုတာဒါပဲဖြစ်မယ်၊..ငါဘာလုပ်သင့်သလဲ၊ငါအသက်မရှင်တော့ရင်သားလေးနှင့်ငါ့မိဘတွေဒုကခရောက်မကျန်ရအောင်ငါကြံစည်မှဖြစ်တော့မယ်၊ဘာလုပ်ရမလဲ………။ကိုမင်းသူရေကျမကိုခွင့်လွှတ်ပါရှင်၊ကျမမောင့်ကိုမချစ်လို့မဟုတ်ပါဘူး၊မောင့်အပေါ်သစ္စာမရှိလို့မဟုတ်ပါဘူးရှင်၊ကျမဘဝကရှင်နှင့်ရိုးမြေကျပေါင်းရဖို့ကံကပါမလာဘူးလေ။.
.မေလေးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချလိုက်တယ် ‘”မေမေ” ဘာလည်းမေလေး” “သမီးအလုပ်တစ်ခုလုပ်မလို့” “ဘာလုပ်မလို့လည်းသမီး” “ပွဲစားအလုပ်ပါမေမေ” “သမီးရေဟိုတလောကမှဆေးခန်းမှာခွဲစိတ်ရသေးတယ်မဟုတ်လား” “ဟုတ်တယ်မေမေ.ကုန်ကျစရိတ်တွေများလို့၊သားလေးကအခုဆိုမူကြိုတောသ်တက်နေပြီလေ၊အဲဒါကြောင့်ပါမေမေ” “ သမီးသဘောပါကွယ်” မေလေးကျောင်းတုန်းကသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုသတိရလိုက်တယ်။သူကဟိုတယ်မှာမန်နေဂျာဖြစ်နေပြီ၊သူ့ဆီပဲအကူအီာတောင်းရမယ်၊ဆိုပြီးဖုန်းဆက်တော့အဆက်အသွယ်ရတာနှင့်သွားလိုက်တယ် “လာဟေ့မေလေး၊နင်လည်းအခုမှပေါ်လာတယ်” “အေးလေ.ငါလည်းကလေးမွေးနေတာနှင့်ဟ” “နင်ကကလေးမွေးတယ်သာပြောတယ်အရင်ကထက်ကိုလှလာပါလား” “ဟင်းးးးဟင်းးးး” “ဒါနှင့်ဘာကိစ္စရှိလဲ” “ငါပြောတာခဏနးထောင်၊ဘယ်သူ့ကိုမှပြန်မပြောရဘူး” “အေးပါပြောပါ” “ငါဒုက္ခရောက်နေတယ်၊အခုငါသိပ်မနေရတော့ဘူး၊ငါမသေခင်ငါ့မိသားစုအတွက်ငွေရှာခဲ့မှရတော့မယ်၊အဲဒါကြောင့်နင့်ဆီလာခဲ့တာ
“ဟင်..သူငယ်ချင်းနင့်အဖြစ်ကဆိုးလိုက်တာဟာ” “အေးလေ.နင်ကူညီမှရမယ်” “အင်းးးကူညီတာကရတယ်၊ဒီမှာကနိုင်ငံခြားသားပဲရှိတယ်” “အင်း”တစ်ခါတလေလည်းမြန်မာတွေလာပါတယ်” “မြန်မာတွေဆိုတော့ငါစိတ်ပူတယ်ဟ” “အင်းစိတ်တော့ပူစရာသိပ်မရှိဘူး၊ဒီမှာတည်းတာဆိုတော့လူကြီးပိုင်းပါပဲ၊ဗရုတ်သုက္ခတော့သိပ်မလာဘူး” “ငါဈေးကောင်းကောင်းလိုချင်တာ၊အဲဒါမှအဆင်ပြေမယ်” “ဝန်ဆောင်မှု့ကောင်းရင်ရပါတယ်ဟာ” “ငါလည်းမလုပ်ဖူးဘူး” “နင်လည်းယောက်ျားရပြီးသားပဲ” “အင်းပါဟာ” “အော်ငါနင်ပြောမှသတိရတယ်၊ငါမှာဘောစိတစ်ယောက်မှာထားတာရှိတယ်၊သူကအမှန်တွေပဲလက်ခံတာ၊ငါပြောလိုက်မယ်၊မနက်ဖြန်ကိုးနာရီလောက်လာခဲ့ပေါ့၊ငါပိုက်ဆံများများတောင်းလိုက်ပါ့မယ်၊” “အေးလေ.နင်လည်းရာခိုင်နှုန်းနှင့်ယူပေါ့” “မယူရက်ပါဘူးသူငယ်ချင်းရယ်” “နင်ဖုန်းနံပါတ်ပေးခဲ့၊အလုပ်ဖြစ်ရင်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ပြောမယ်” “အေးပါကျေးဇူးပါဟာ” “အေးနေအုံးဟိုတစ်ကောင်ရှိသေးတယ်၊ရန်နိုင်မင်းလေ၊သူကတိုးဂိုက်လုပ်နေတာ၊သူ့ဆီကအများအားဖြင့်အော်ဒါတက်တယ်၊သူနှင့်လည်းငါဆက်သွယ်ပါ့မယ်” “အေးကျေးဇူးသူငယ်ချင်း” မေလေးအိမ်သို့အပြန်မှာလမ်းမှာရွှေအတုနည်းနည်းဝယ်ပြီးပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်။
နောက်ရက်သားလေးကိုကျောင်းကားပေါ်တင်ပြီး၊မြန်မာဝတ်စုံဝတ်ပြီးရွှေဆင်ကာတက်စီငှားပြီးဟိုတယ်ရောက်ခဲ့တော့။သူငယ်ချင်းကအခန်းထဲလိုက်ပို့တယ်။အသက်လေးဆယ်ခန့်ရှိလူကြီးတစ်ယောက်ကာတံခါးလာဖွင့်ပေးတယ်လေ။သူငယ်ချင်းကတံခါးပိတ်ပြီးပြန်သွားတော့ “ဟ..ဒီတစ်ခါတစ်မျိုးပဲ၊မြန်မာဝတ်စုံနှင့်ထူးထူးဆန်းဆန်း” မေလေးအခန်းထဲသာဝင်လာရတယ်ခြေဖျားလက်ဖျားတွေအေးစက်ပြီးဒူးတုန်ချင်သလိုဖြစ်နေတယ်လေ၊ဒီအလုပ်ကပထမဆုံးလက်ခံထားတာဆိုတော့စိတ်မှာမရဲဘူးလေ” “ဟုတ်ကဲ့ရှင့်” “အင်းငါလည်းဒါမျိုးမှသဘောကျတာ” “ဘယ်လိုလဲအရင်ကလုပ်ဖူးလား” “အရင်တော့မလုပ်ဖူးဘူး၊ဒါပေမယ့်အိမ်ထောင်ရှိဖူးတယ်” “အော..၊နင့်ပုံကသိသာပါတယ်။မလုပ်ဖူးမှန်း” “နင့်ပုံကမြန်မာဆန်ပြီးလှတယ်ဟ။ဘာလို့ဒီအလုပ်လုပ်လဲ” “ကျမလည်းအခက်အခဲရှိလို့ပါရှင်” “အေးလေဒီနေ့တနေ့လုံးငါနေမှာ၊အေးအေးဆေးဆေးပေါ့။
ဝန်ဆောင်မှု့ကောင်းရင်မုန်ဘိုးပေးပါမယ်။” “ကျမကြိုးစားပါ့မယ်” “ဒါနှင့်လီးစုပ်ဖူးတယ်မဟုတ်လား” “ရှင်..မလုပ်ဖူးဘူး” “ဟေအိမ်ထောင်ကျဖူးတယ်ဆို” “ဟုတ်..ဒါပေမယ့်မလုပ်ခဲ့ဖူးဘူး” “ငါကအဲဒါကိုသဘောကျတာ” “ကျမကြိုးစားပြီးလုပ်ပါ့မယ်” “အေးလေ.နင်လုပ်ပေးရင်မုန်ဘိုးသပ်သပ်ပေးပါ့မယ်” “ဟုတ်ကဲ့ရှင့်” “ကဲအဝတ်အစားတွေချွတ်ပြီးသန့်ရှင်းရေးလုပ်လိုက်တော့၊ငါအရမ်းလုပ်ချင်နေပြီ” “ဟုတ်ကဲ့ရှင့်” မေလေးသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်ရေချိုးခန်းဝင်လိုက်တယ်။စိတ်ထဲမှာဝမ်းနည်းမှု့တွေနှင့်ပေါ့။အဝတ်အစားချွတ်ပြီးသန့်ရှင်းရေးလုပ်တယ်။ပြီးတော့သဘက်တစ်ထည်ပတ်ပြီးအိပ်ခန်းဖက်ထွက်ခဲ့ရတော့တယ် မေလေးမှာစိတ်လှုပ်ရှားပြီးအခန်းထဲသို့ဝင်လာခဲ့တယ်။
အပြင်ရောက်တော့ဟိုလူကြီးကအဝတ်အစားတွေချွတ်ပြီးကုတင်မှာကျော်မှီပြီးထိုင်နေတယ်။မေလေးလည်းစိတ်ထဲအားမွေးပြီးကုတင်အနားကိုသွားလိုက်တယ် “လာလေညီမ..ညီမလေးနာမည်ဘယ်သူလဲညီမ” “မေလေးပါရှင်” “မေလေးမှတ်ထားနှော်အကိုကဦးကိုကိုအောင်ပါ” “ဟုတ်ကဲ့ရှင်” “လာပါဦးကွာ၊မင်းသဘက်ကြီးချွတ်လိုက်ပါအုံး” “ဟုတ်..ဟုတ်ကဲ့”မေလေးလည်းရှက်ရွှံစွာပင်သဘက်အားချွတ်လိုက်ရတော့သည်။ “အားးးမေလေး.ညီမကယောက်ျားသာရထားတာ၊နို့တွေကအပျိုအတိုင်းပါလား။ခလေးမရဘူးလား” “ရဖူးပါတယ်၊နို့မတိုက်ရလို့ပါ” “လာလေအနားကိုခဏလောက်နို့စို့ပေးမယ်” “မေလေးရှက်သွားတယ်၊ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပေးရမှာမို့အနားကိုကပ်လိုက်တယ်။
“အားးးအရမ်းမိုက်တယ်ကွာလုံးကျစ်ကျစ်ကလေးနှင့်မာနေတာပဲ” “အဟင်းးး” “ပြွတ်..ပြွတ်.ပြွတ်” “အမလေးးးအိုးးးး.ကျွတ်..ကျွတ်..” မေလေးမှာယောက်ျားနှင့်ဝေးနေတော့နို့စို့ခံရတာနှင့်ကာမစိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ကိုယ်ဘာသာ.ဒီအလုပ်မှာသာယာစိတ်မမွေးလည်း.ယောက်ျားမိန်းမဆုံတွေ့ပြီးဒီလိုလုပ်ရမှာတော့စိတ်ကလှုပ်ရှားမိတယ်လေ။စိတ်ထဲမှာတော့ “ခွင့်လွှတ်ပါမောင်၊မေလေးမတတ်သာလို့ပါလို့တောင်းပန်ရင်းဦးကိုကိုအောင်ကိုဝန်ဆောင်မှု့ပေးနိုင်ရန်သာစိတ်ထည့်ရလေသည်။ဦးကိုကိုအောင်းဒီလိုဟာမျိုးကိုကျွမ်းကျင်သူဖြစ်တဲ့အတွက်မေလေးစိတ်ပိုကြွလာဖို့သာကြံဆောင်ပါတော့တယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ဦးသားစိတ်တူကိုယ်သူလိုးနီုင်ရင်ကာမအရသာကိုအပြည့်အဝခံစားရရင်အကောင်းဆုံးလေ
“ပြွတ်..ပြွတ်..ပြွတ်” “အက့်..ဟင့်..ဟင့်..” မိမိစိတ်ကိုမသာယာအောင်လုပ်ပေမယ့်ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံဖြစ်၍စိတ်ကိုထိန်းချုပ်မရနိုင်တဲ့အတွက်ထိန်းထားသည့်ကြားကမေလေးညည်းညူမိတယ် “ကိုကိုအောင်ကတော့.နို့စွိုရတာဝါသနာပေါတော့စို့လိုက်ခဲလျှာနှင့်ယက်လိုက်မို့မေလေးတစ်ယောက်ကာမနောက်ကိုပါသထက်ပါလာခဲ့ရပြီးခေါင်းမော့ရင်းတဟင်းဟင်းးညည်းလေသည်။ဦးကိုကိုအောင်စိတ်မှာလည်းဒီလိုအရိုင်းမလေးအားမိမိလိုရာဆွဲခေါ်နိုင်အောင်ကြံစင်္ညအားထုတ်ရန်ဆုံဖြတ်လိုက်သည်။နို့စို့ရင်းပင်မေလေးအဖုတ်ထဲလက်နှီုက်၍ပိပ်အားပွတ်ပေးလိုက်သည်။ “အာ့..အကို…..အင့်ဟင့်..ဟင့်” ပိပိထဲမှအရည်များထွက်သောအခါမှဦးကိုကိုအောင်ကရပ်လိုက်ပြီး “မေလေးစုပ်ပေးတော့ကွာ” “ဟုတ်….ဟုတ်ကဲ့ပါ” မေလေးယောက်ျားလီးကိုတောင်ရွံလို့မစုပ်ခဲ့ဖူးတာ၊အခုတစိမ်းလီးဆိုတော့ပိုဆိုးတာပေါ့။
ချီတုံချတုံစဉ်းစားရင်း ယောက်ျားရေခွင့်လွှတ်ပါလို့တောင်းပန်ရင်းဦးကိုကိုအောင်လီးကိုငုံစုပ်ရလေသည်။ဦးကိုအောင်လီးမှာမောင့်လီးထက်ကြီးသည်ကိုသတိထားမိပြီးအံချင်သောစိတ်အားထိန်းချုပ်ပြီးလီးအားငုံစုပ်ရင်း၊ဒါလည်းအသားချင်းပါပဲလေလို့တွေးလိုက်ရတယ်။စုပ်ရုံနှင့်လီးထဲကအရည်တွေလျှာပေါ်ရောက်လာတယ်။အရသာကငံပြပြနှင့်အနံမရတာကြောင့်ဆက်ပြီးစုပ်လိုက်တယ် “အားကောင်းတယ်မေလေး၊ဒစ်လေးကိုပါယက်ပေးပါ” ဦးကိုကိုအောင်ပြောသည့်အတိုင်းဒစ်ပတ်လည်လျှာနှင့်ယက်ပေးလိုက်ရတာပေါ့ “အားးကောင်းတယ်.လီးထိပ်ဝကိုလည်းလျှာနှင့်ထိုးပေးပါ” မေလေးသူပြောတဲ့အတိုင်းအဝကိုလျှာဖျားလေးနှင့်ထိုးပေးလိုက်တော့” “အား.ကောင်းလိုက်တာမေလေးရာ၊လိုးတော့မယ်မေလေး” “ဟုတ်.ဟုတ်ကဲ့” တကယ်တန်းအလိုးခံရမယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာတမျိုးလေးခံစားရပြန်တယ်ရှင်” “မေလေးဒီနေရာမှာအိပ်လိုက်” “မေလေးသဘောပေါက်ပါတယ်သူပြကတည်းကကုတင်ကန့်လန့်အိပ်ပြီးခြေထောက်ကားလိုးမယ်ဆိုတာအဲဒါကြောင့်ပုံစံကျအောင်လုပ်ပေးလိုက်ရပါတော့တယ်။
မေလေးကအိပ်ရာပေါ်လှလိုက်တော့ဦးကိုအောင်ကမေလေးအဖုတ်ကိုကြည့်တဲ့အခါအရမ်းလည်းလှနေသလိုမြင်ရတယ်။ဖောင်းမို့နေတဲ့ဆီးခုံနှင့်အမွေးပါးလေးရယ်။အရွတ်မပေါ်တဲ့နှုတ်ခမ်းသားကြီးတွေမြင်တော့တဏှာစိတ်ပြင်းတဲ့ဦးကိုအောင်ဟာမနေနိုင်တော့ပဲကုတင်အောက်ကနေပြီးလီးကိုကွနဒွန်စွပ်ကာမေလေးအဖုတ်ကိုလီးသွင်းလိုက်တယ်။ အလိုးမခံရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့အဖုတ်ထဲလီးကပြည့်ကြပ်ပြီးဝင်လာတယ်၊မေလေးလည်းတချက်တော့တွန့်သွားတာပေါ့ “အာ့..” ကိုကိုအောင်လည်းပြည့်ကျပ်နေတဲ့အတွက်သဘောအတော်ကျသွားပြီးလီးကိုဆောင့်သွင်းလိုက်တယ် “ဗျစ် .ဗျစ်..ဘွတ်. “ “အာ့…အမလေူးူ” မေလေး.ကအမလေးတတော့ဦးကိုကိုအောင်ပိုပြီးသဘောကျတာကြောင့်။ဆက်တိုက်လိုပဲဆက်လိုးလိုက်တော့တယ်။
‘”ဗျစ်..ဗျစ်..ဘွတ်..ဘွတ်” “အာ့..အိုးးးရှီးးရှီးးအာ့ “ သုံးမိနစ်လောက်မနားတမ်းဆောင့်လိုက်တယိ။မေလေးလည်းတဖြေးဖြေး..ကာမစိတ်တွေထလာပြီးတပသ့်အင့်ညည်းလာတော့တယ်။လီးကြီးကဝင်ချည်ထွက်ချည်နှင့်ဖီလင်တွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးမေလေးညည်းလာတယ်၊ချစ်သူမဟုတ်ပေမယ့်အဖုတ်ကတွောသူ့အလုပ်ကိုသူလုပ်တာပါပဲ။လုပ်တာကောင်းရင်ကောင်းသလိုတုန့်ပြန်တာဆိုတော့တဖြေးဖြေးနှင့်ခံစားချက်ကမြင့်တက်လာရတော့မေလေးမှာအိပ်ရာခင်းကိုသာတသယင်းတင်းလေဆုပ်ကိုင်ပြီးနေရတယ်။ “ဘွတ်..ဖန်းးးဖန်းးး” “ဇွိ..ဗျိ…ဗျိ..ဗျစ်.” “အင့်..ဟင်းးဟင်းးးးအာ့” ကိုကိုအောင်လိုးရင်းနို့စို့တယ်။မေလေးဒီတစ်ခါတော့နို့လည်းအစို့ခံရသလိုအလိုးလည်းခံရတဲ့အတွက်ပြီးချင်လာတော့တယ်။
“အာ့..အင့်အာ့…ရှီးးးရှီးးးးးးး” “ဇွပ်ပ်..ဘွတ်..ဖတ်..ဖန်းးဖန်းးး” “အိုး…..အာ့..ရှီးးရှီးးးးးအားးးး” လိုးချိန်ဆယ်မိနစ်လောက်မှာမေလေးမထိန်းနိုင်တော့ပဲပြီးသွားပါတယ်။ဒါပေမယ့်ဦးကိုကိုအောင်ကမပြီးသေးတဲ့အတွက်မေလေးမှာဖင်ဘူးတောင်းထောင်ပေးရတယ်။ ဦးကိုကိုအောင်ဟာ..တဏှာစိတ်ကြီးသူမို့မေလေးဖင်ဘူးတောင်းထောင်နေတာကိုကြည့်ပြီးလိုးရင်းမေလေးဖင်ကိုတံတွေးထွေးလိုက်တယ်။မေလေးလန့်သွားပြီး “ဖင်တော့အလုပ်မခံနိုင်ဘူးအကို” “အေးပါ” ဆိုပြီးဖင်ဝနားလက်မထားကာတင်သားအားဆုပ်ကိုင်ပြီးတဗျင်းဗျင်းလိုးပါတယ် “ခုဏတုန်းကမေလေးပြီးထားလို့အရည်တွေထွက်နေတာကြောင့်အဖုတ်အဝမှာရွဲနေတော့တယ်။
ကိုကိုအာင်းလည်းလက်မနှင့်သုတ်ပြီးမေလေးဖင်ဝကိုလာပွတ်ပါတယ်။အရည်နှင့်တံတွေးပေါင်းပြီးဖင်ဝကချောမွတ်လာတယ်။ဖင်ပြတိပြီးအလိုးခံရတော့ပိုယားသလိုပိုပြီးညည်းလာမိတယ်။ကိုကိုအောင်းလိုးရင့်နှင့်မေလေးဖင်ထဲလက်မထည့်တော့ “အာ့..အကိုမလုပ်နှင့်ရှင့်ကျမနာလို့ပါ။ကိုကိုအောသ်ကလက်မပြန်မနှုတပဲဆက်တိုက်လိုးလိုက်တယ် “ပ်..ဘွတ်..ဖတ်..ဖန်းးဖန်းးး “အင့်..ဟင်းးဟင်းးးးအာ့” “ဇွပ်ပ်..ဘွတ်..ဖတ်..ဖန်းးဖန်းးး” “အိုး…..အာ့..ရှီးးရှီးးးးးအားးးး” ဆယ်မိနစ်လောက်လိုးပြီးသောအခါဦးကိုကိုအောင်ပြီးသွားပါရတော့တယ်” ဦးကိုကိုအောင်ရောမေလေးပါရေချိုးခန်းဝင်ပြီးသန့်ရှင်းရေးလုပပြီး၊နေ့လည်စာကိုဟိုတယ်မှာပြီးစားသောက်လိုက်ကာနေ့လည်ထမင်းစားကာတရေးအိပ်လိုက်ကြပြီးညနေရောက်မှနှစ်ကြိဆက်လိုးလိုက်ကြပြီးအိမ်ကိုပြနခဲ့တော့တယ်။
နောက်တရက်နှစ်ရက်အကြာမှာသူငယ်ချင်းဆီကဖုန်းလာတယ်။ “မေလေးပွဲဖြစ်တယ်” “ဟုတ်လား၊နင်ဟိုတနေ့ကတော်တောရလိုက်တယ်မလား” “အေး.ရလိုက်တယ်” “ဦးကိုကိုအောင်ကသူသာမကသွူရဲ့ပါတနာတွေပါခေါ်လာတတ်တယ်၊လူကြီးပိုင်းတွေ၊ဂွင်ရိုကိရင်းဧည့်ခံတာ။သူကပိုက်ဆံပိုပေးတတ်ပါတယ်” “ဟုတ်လား” “အေးတစ်ခါတခါနိုင်ငံခြားသားလည်းပါတယ်” “ဩော်…” “အေးဒီတစ်ခါနိုင်ငံခြားသားပဲ၊ငါ.ငါးရာတောင်းထားတယ်၊သုကလည်းပေးမယ်တဲ့၊မြန်မာပြည်ရောက်တုန်းမြန်မာမကိုလုပ်ကြည့်ချင်တာတဲ့၊မြန်မာဆန်တဲ့မိန်းကလေးမျိုးလိုချင်တဲ့ဟဲ့”
“အေးလေငါလာခဲ့မယ်၊အချိန်က” “မနက်ကတည်းကပဲ” “အေးအေး” မေလေးမရှက်နိုင်တော့ပါ၊မရရအောင်ငွေရှာရတော့မယ်။တနေ့ကအလုပ်လက်ခံပြီးကတည်းကစိတ်ရဲရဲနှင့်လုပ်တော့မယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်” နောက်နေ့စောစောပဲဟိုတယ်ကိုသွားလိုက်တယ် “သူငယ်ချင်းကအခန်းနံပါတ်ပြောထားလို့တစ်ခါတည်းသွားလိုက်တာပါ။စိတ်ထဲမှာတော့ကြောက်မိတယ်၊နိုင်ငံခြားသားဆိုတော့လူကောင်ထွားတယ်လေ။ “အခန်းတံခါးကိုခေါက်လိုက်တော့လာဖွင့်တယ်” “မင်းမေလေးဟုတ်တယ်မလား” အင်္ဂလိပ်လိုပဲပြောတာပါ။
လူကအရပ်ခြောက်ပေနီးပါးလောက်ရှိတယ်။ “ဟုတ်တယ်၊မစ္စတာ” “မင်းသိပ်လှတာပဲ” ကျမရယ်ပြလိုက်တယ်၊အီးမေဂျာနှင့်ကျောက်းပြီးပေမယ့်နားလည်တာတော့နားလည်ပါတယ်၊ပြန်ပြောဖို့ခက်နေတာကြောင့်ရယ်ပဲပြလိုက်တယ်။နားလည်ရင်Yesပေါ့။ “ငါမင်းလိုမျိုးကိုကြိုက်တယ် “အင်း” “မင်းလိုမြန်မာဝတ်စုံနှင့်ဆိုတော့ငါအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားတယ်၊ငါမင်းအဝတ်တွေချွတ်လိုက်မယ်နှော်” “အင်း “နိုင်ငံခြားသားကအဝတ်တွေကိုတလွှာချင်းချွတ်ချပြီး” “သိပ်ကောင်းတာပဲ” “ငါစိတ်အရမ်းလှုပ်ရှားလာပြီ” “လာပါ.မေလေး” မေလေးမှာအဝတ်အစားမရှိတော့ပဲ၊သူခေါ်ရာအိပ်ရာထဲကိုရောက်ခဲ့ပြီးအိပ်ရာပေါ်လှဲချလိုက်တယ်။
အဲဒီလူကမေလေးခါးအောက်ခေါင်းအုံးခုလို့မေလေးခါးကြွပေးလိုက်ရတယ်” သူလိုးတော့မယ်ထင်တယ်၊မမှုတ်ခိုင်းတော့ဘူးလားမေလေးတွေးမိတာ။ ဟင်အထင်နှင့်အမြင်လွဲသွားပါလား” “အာ့…” ဟိုကမေလေးပိပိကိုယက်လိုက်ခြင်းပါ။လျှာကြမ်းကြီးနှင့်ယက်တာခံလိုက်ရတဲ့ကျမခါးပါကော့သွားတယ် “ပလပ်..ပလပ်.” “အင့်…အင်းးဟင့်..အာ့.” အရသ်ကယောက်ျားကိုဘုန့်မှာစိုးလို့မလုပ်ခိုင်းခဲ့တာ၊အခုတောမေလေးတစ်ယောက်အိပ်ရာခင်းကိုဆုပ်ကိုင်ပြီးအော်နေရပြီလေ၊
ဟိုကပိပိထဲလက်ကလေးထိုးပြီးအစေ့ကိုစုပ်လိုက်တာ “ပြွတ်..ပြွတ်..ပြွတ်” “အာ့..အမလေး…..ထွက်ကုန်ပါပြီ..အား” မေလေးစိတ်မထိန်းနိုင်ပဲအော်ညည်းလိုက်ပါတော့တယ်။တစ်သက်မှာဒီတစ်ခါပဲအယက်ခံဖူးလို့အရင်ကအယက်မခံဖူးတာတောင်နောင်တရချင်သွားတယ်လေ။ “မေလေးငါ့ကိုစုပ်ပေးပါ” “အင်းး” မေလေးကသူ့ဘောင်းဘီကိုချွတ်လိုက်ပြီးကြည့်လိုက်တော့လီးကဦးကိုကိုအောင်လောက်ပါပဲ။
ဒါပေမယ့်ရှည်တယ်အ ကြီးကြီးမဟုတ်ဘူး။ ကျမလည်းဦးကိုကိုအောင်သင်ပေးတဲ့ပုံတွေအတိုင်းလုပ်ပေးလိုက်တာပေါ့။ရွံတော့ရွံတယ်၊ဒါပေမယ့်သူ့လီးကဦးကိုအောင်လိုညိုညိုကြီးမဟုတ်ဘူး၊ဖြူဖြူဖွေးဖွေးပါပဲ၊နောက်တော့သူကကျမကိုလိုးဖို့လုပ်ပါတယ်။ “မေလေး.ငါ့အပေါ်ကလုပ်ပေးပါ” ကျမလည်းဒီလိုမျိုးလုပ်ဖူးပါတယ်။အဲဒီတော့ကျမလည်း သူ့အပေါ်ကခွပြီးလီးကိုကိုင်ထည့်လိုက်လိုက်တယ်” “ဗျစ်….ဗျစ်…ဗျစ်” “အာ့..ကျမအဆုံးအထိမထိုင်ရဲဘူး၊ကြောက်တယ်လေ၊ “ကျမကသူ့ရင်ဘတ်ပေါ်လက်ထောက်ပြီးအဆုံးအထိမဝင်အောင်လုပ်သေးတယ်။ “ဗျစ်..ဗျစ်….ဗျစ်” “အာ့..အင့်.” အောက်ကနေပြီးတော့ကျမထိုင်အချမှာအပေါ်ကိုပင့်ပြီးလိုးတော့ကျမတချက်အောင့်သွားတယ်လေ။သားအိမ်များထိသွားသလားမသိဘူး” “နောက်တော့သူကအောက်ကနေပင့်ပြီးလိုးတော့တယ်။ကြာတော့လည်းခံနိုင်သွားပြီးကာမအရသာကတွေ့လာတော့တယ်။
ကျမလည်းမြန်မြန်ပဲအပေါ်ကဆောင့်ချပေးလိုက်တယ်။ပိပိထဲလီးဝင်သံတွေကတဘွတ်ဘွတ်တဇွပ်..ဇွပ်နှင့်ပေါ့ “ဗျိ..ဗြိ.ဗျစ်..ဗျစ်..ဘွတ်..ဖတ်..ဖန်းးဖန်း” “အင့်..ဟင့်..ဟင့်.” သူကကျမကိုကျမကိုရပ်ခိုင်းပြီးခါးကိုဖက်ကာ၊ကုတင်အောက်ကိုဆင်းတယ်။လီးကျွတ်မှာစိုးလို့ခါးကိုတင်းတင်းဖက်ထားတာပါ။ရှည်လျားတဲ့လီးကအပြင်ကိုကျွတ်မထွက်ပါဘူး” ကုတင်ပေါ်ကနေအောက်ကိုဆင်းတော့ကျမကသူ့လည်ပင်းကိုဖက်ထားတယ်။သူကကျမပေါင်အောက်ကလက်ဝင်လျှိုကာကျမကိုမပြီးပင့်လိုးရောကျမဖင်ကိုအတင်အချလုပ်ပြီးလိုးပါတော့တယ်။ကျမစိုးရိမ်တာကွန်ဒွန်ပေါက်ငွားမှာကိုပါ။ဒီအလုပ်ကရောဂါရဖို့လွယ်တယ်။ကျမကြောက်တယ်လေ။သူကကျမကိုချီပြီးရှစ်မိနစ်ခန့်လိုးလိုက်တော့ကျမလည်း ပြီးသွားပါတော့တယ်။
မနားလို့လည်းမဖြစ်ဘူး၊မိန်းမဓမ္မတာလာနေတယ်လေ၊လာပြီးသုံးရင်လောက်ကြာတော့ဦးကိုကိုအောင်ဆီကဖုန်းလာတယ် “ဟလို” “ဟုတ်ကဲ့ပြောပါရှင့်” “မေလေး.ငါကိုကိုအောင်” “ဟုတ်ကဲ့” “ငါအရမ်းအရေးကြီးတယ်၊နေပြည်တော်ခဏလာခဲ့” “ဟင်းးးကျမနယ်ကိုမလိုက်ချင်ဘူး” “တပတ်လောက်ပါဟ” “အိမ်ကထွက်ဖို့အဆင်မပြေလို့” “လာခဲ့စမ်းပါ.ကြိုက်ဈေးတောင်းဟာ” “ငါလူတစ်ယောက်ဧည့်ခံစရာရှိတယ်” “အင်းးးး” “ငါဆယ်သိန်းပေးမယ်.သုံးရက်ပဲ” “နည်းတယ်” “အရေးကြီးပါတယ်ဆိုမှဆယ့်ငါးသိန်းဟာ” “ဒါဆိုလည်းပြီးရော” ကျမနေပြည်တော်သွားတော့ဘောဂသီရိမှာဦးကျိုကိုအောင်ကိုယ်တိုင်ကားနှင့်လာခေါ်ပြီးမောင့်ပလဲစင့်ဟိုတယ်ခေါ်သွားတယ်။အဲဒီကလူရှင်းတော့သူကအဲဒီမှာလူကြီးတစ်ယောက်ဧည့်ခံမှာပေါ့ “ကျမရောက်သွားတော့”
“အား.ခင်များရွေးတတ်သားပဲကိုအောင်’” “ဆရာသမားအကြိုက်သိတယ်လေ” “စိတ်ကောချရရဲ့လား” “ဟိုတပတ်ကမှသူကစလုပ်တာဗျ။ကျနော်ပထမဆုံးပဲ” “ဟုတ်လား” “ဗမာဆန်ဆန်ဆိုတော့ရှယ်ပဲဗျ” “ကဲပါဆရာသမားပဲသုံးပါ။ကျနော်သိတ်ချရလို့ခေါ်ထားတာ။ဈေးကြီးအဖိုးကောင်းတယ်” “ဟင်းးးဟင်းးး” “မေလေးငါသွားတော့မယ်၊ငါ့ဆရာကိုသေချာပြုစုလိုက်” “ဟုတ်ကဲ့” “မေလေးဟုတ်လားညီမ..ဟုတ်တယ်ရှင့်” “အေး..ငါ့ကိုလည်းမှတ်ထညးထား၊ကိုမြင့်မောင်တဲ့” “ဟုတ်ကဲ့” ညရောက်တော့ကိုမြင့်မောင်မူးမူးလေးနှင့်ရောက်လာပြီး “မေလေး.စရအောင်” “ဟုတ်ကဲ့ရှင့်” “လာကွာငါ့အဝတ်တွေချွတ်ပေးစမ်းပါ။” “မေလေးလည်းထျွတိပေးလိုက်တယ်၊ဒီလူတွေကအစိုးလုပ်ငန်းတွေကိခြွင်ယူတဲ့လူတွေ၊ငွေပေါတယ်လေ၊ “မေလေးငါ့ကိုစုပ်ပေးစမ်းပါအုံးဟာ” ကျမလည်းတဖြေးဖြေးနှင့်လီးကိုမရွံတော့ဘူး၊ယောက်ျားတွေတဏှာထမှပိုက်ဆံများများရမှာလေ၊ဒီတော့လည်းသူတို့လီးအမြဲတောင်နိုင်ပါစေလို့ပဲဆုတောင်းရတယ်။
ကျမလည်းသူကျေနပ်သည်အထိလီးစုပ်ပေးရတယ်။ “မေလေး’” “ရှင်.” “နင်ဖင်ခံဖူးလား” “မခံဖူးပါဘူးရှင့်” “ငါကသူများမလုပ်ဖူးတာပဲလုပ်ချင်တာ” “မလုပ်ပါနှင့်ရှင်၊ကျမကြောက်လို့ပါ’ “အေး.ငါပိုက်ဆံငါးသိန်းပေးမယ်၊နင်ဖင်ခံမလား” “အမလေး.တွေးပြီးကြောက်မိတယ်၊ဒါပေမယ့်တဖက်ကလည်းငါးသိန်းတဲ့၊ပိုက်ဆံပေါတဲ့လူတွေမွိုသာပေးနိုင်တာ။ “တကယ်ပေးရင်.လုပ်ပေးပါ့မယ်” “ရော့ငါ့ပိုက်ဆံအိပိငါသိန်းယူလိုက်” “ငါမေးပြီးပြီကိုအောင်ကို နင်ဖငိမခံဖူးဘူးဆိုလို့လုပ်ချင်တာနင့်ဖ၊င်ကအပျိုပဲရှိသေးတာ” “ဟုတ်ကဲ့.” “ဒီလိုမှပေါ့” ကျမသားရှေ့ရေးအတွက်ဖင်မခံဖူးပေမယ့်ခံလိုက်မယ်လို့ဆုံဖြတ်လိုက်တယ်။သူ့ကိုသူကျေနပ်တဲ့အထိစုပ်ပေးလိုက်တယ်၊ “မေလေးနင့်ဖင်ကိုကုန်းချမှာနှေိာ” “ဟုတ်ကဲ့ရှင့်”ကျမလည်းကုန်းပေးလိုက်တယ်” ကိုမြင့်မောင်တစ်ယောက်နောက်ကနေပြီးကုန်းကာလီးကိုသွင်းမယ့်ဟန်ပြင်နေတယ်။
ကျမလည်းဖင်ထဲလီးဝင်မဲ့အချိန်ကိုသာကျမရင်တထိတ်ထိတ်နှငိ့စောင့်နေမိတယ်၊ သူကကျမဖင်ဝကိုတံတွေးထွေးလိုက်ကာလီးကိုစအိုဝအားဖြတ်ပြီးရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်နေတာ၊လေ။နောက်ကျတော့လီးကိုင်ပြီးကျမဖင်အအိုဝကိုလီးကိုတော့ပြီးသွင်းတယ်။ ပြွတ်” ပွတ်” “အားးးးနာတယ်..အားးး” ကိုမြင့်မောင်ကမညှာတော့ဘူးမရမကအထဲကိုလီးအဆုံးထိသွင်းတော့တယ် ကိုမြင့်မောင်လိုးလိုက်တော့ကျမဖင်ထဲမှာပူကနဲမီးစနှင့်ထိုးသလိုခံစားလိုက်ရတယ်။အဝမှာစပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းခံစားရပြီးအထဲရောက်တော့အောင့်ပြီးခံစားရတယ် “အာ့အကို..ခဏ” “ဗျစ်…ဗျစ်..ဘွတ်..ဘွတ်” “အာ့အမလေး..အင့်..အိုး” “ခဏနေပါအုံး….အ.အား” ကျမမျက်ရည်တွေပါထွက်တယ်ရှင်။နောင်တော့လည်ူတဖြေးဖြေးသက်သာလာတယ်။
ရောဂါကကျွမ်းသွားပါပြီ၊ယောက်ျားပြောင်းလာတဲ့အခါကျမကဆေးရုံမှာပက်လက်ကလေးနှင့်ပေါ့ “မေလေး” ကျနော့်တို့သားအဖထားခဲ့ပြီဗျာ”အီးဟီးးးးး ‘”မေ..မေ..” “သမီး..” ကဲအားလုံးပြန်ရအောင်” ကိုမင်းသူလည်းပူဆွေးသောကရောက်ရတယ်။ရက်လည်ပြီးမှမေလေးသေတ္တာရှာတော့မှသားအတွက်ငွေတွေဘဏ်မှာအပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတော့တယ်။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ဈေးကွီးအဖိုးတနျ